စက်ာပူရောက် မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မိသားစုရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ - ၂၀၁၁ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ကြော်ငြာချက်များ > MEF အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှုများ > စက်ာပူရောက် မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မိသားစုရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ - ၂၀၁၁
View Full Version : စက်ာပူရောက် မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မိသားစုရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ - ၂၀၁၁
AGTI Society ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲ (http://www.myanmarengineer.org/forums/showthread.php?735-%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9G.T.I/page5)က အပြန်လမ်းမှာ၊ အကိုဒိ နဲ့အတူ စက်ာပူရောက် မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မိသားစုရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ လုပ်ဖို့၊ တိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အိမ်ပြန်ရောက်လို့၊ ဖိုရမ်ထဲ ဝင်လိုက်တဲ့ အခါ၊ ဆရာချစ်က တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ဖို့ စာချွန်လွှာပို့ထားတာ ကို၊ ဖတ်ရပါတယ်။
စက်ာပူရောက်မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မိသားစုတွေကို၊ ဟိုးအရင်ကလို အပြင်မှာ၊ တစုတစည်းတည်း၊ မဆုံဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဖိုရမ် စာမျက်နှာတွေ ကတဆင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းနဲ့ တဆင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ အဆက်အသွယ်ရှိကြပေမယ့်၊ အလုပ် တာဝန်တွေနဲ့ မိသားစုတာဝန်ကြောင့် မအားလပ်ကြတဲ့အတွက် မဆုံဖြစ်ကြသလို၊ ခရီးလွန်နေလို့ မဆုံဖြစ်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတခါတော့ အားတဲ့နေ့လေးတနေ့မှာ၊ စက်ာပူရောက်မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မိသားစုတွေ့ဆုံကြဖို့ ရည်ရွယ် ပါတယ်။ ဆုံမယ့်နေ့၊ ဆုံမယ့် နေရာနဲ့ ဆုံမယ့်အချိန်ကို ရွေးချယ်အကြံပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေခင်ဗျား။
စင်္ကာပူက ဖိုရမ်မာတွေ အချင်းချင်း မတွေ့ဖြစ်တာ (တနှစ်နဲ့ခုနှစ်လကျော်) ကြာနေတာကြောင့် ပြန်လည်စုစည်းတွေ့ဆုံချင်တာပါ။
အဓိကကတော့ အရင်နှစ်က ကိုငယ်လုပ်ပေးထားတဲ့ အောက်မှာပါတဲ့ Video ဖိုင်လေးကို ပြန်လည်ကြည့်မိရင်း အားလုံးကိုသတိရမိလို့ပါ။
ကျနော့်အတွက်ကတော့ အချိန် နေရာ သိပ်ပြသာနာ မရှိပါ ၊ အဆင်ပြေပါတယ်။
လာမယ့် 22.10.2011 - 26.10.2011 ကြားတော့ အဆင်မပြေပါ။ 5.11.2011 - 7.11.2011 လဲ သိပ်မကျိန်းသေပါ။
MEF members တွေအနေနဲ့ post တွေတင်နေရုံသာမက၊ မကြာခဏတွေ့ဆုံပြီး၊ အလွတ်သဘောဆွေးနွေးမှုတွေမှ တဆင့်၊ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် ရည်ရှည်လည်ပတ်၊ အသက်ဝင်နေစေဖို့၊ အကြံဥာဏ်တွေ၊ တွန်းအားတွေကိုရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ MEF members တွေနဲ့ အပြင်မှာ၊ အလွတ်သဘော မကြာမကြာဆုံဖြစ်ပါတယ်။ နေ့ရက်၊ နေရာ၊ အချိန်တို့နဲ့ ပက်သက်ပြီး အဆင်ပြေသလို၊ ဆန္ဒပြုရွေးချယ်ပေးကြပါ။ ကျွန်တော် လာခဲ့ပါ့မယ်။
နေ့ရက်၊ နေရာ၊ အချိန်တို့နဲ့ ပက်သက်ပြီး အဆင်ပြေသလို၊ ဆန္ဒပြုရွေးချယ်ပေးကြပါ။ ကျွန်တော် လာခဲ့ပါ့မယ်။
ကိုထွန်းက အားလုံးထဲမှာ အကြီးဆုံးဆိုတော့ (အသက် အသက်) (ကိုလှမင်းမောင်ကလွဲရင်) ကိုထွန်းဘဲ ရွေးပေးပါလား။ :peace:
မြို့ထဲက မြန်မာဆိုင်တွေဆိုရင်ရော...ကိုဖြိုး ရဲ့ MEF members တွေအတွက်ဧည့်ခံပွဲတုန်းက ဆုံခဲ့ရတာကို၊ သတိရမိလို့ပါ။ ဂျပန် ဆိုင်တွေလည်းကောင်းပါတယ်။ ဟိုတခါ ဆာကူရာ မှာဆုံသလိုပေါ့။ အဖျော်ယမကာ မရရင်တော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူးဗျ။ အဲ west coast မှာ ကိုရီးယားဆိုင် အသစ်ဖွင့်ထားတာရှိတယ်။ ပြီးတော့ ယိုးဒယားဆိုင်လည်းရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ် East coast တို့ West coast တို့မှာ BBQ သွား လုပ်လည်းရတာပဲ။
အရေးကြီးတာက members တွေအနေနဲ့ သွားရေးလာရေး၊ အဆင်ပြေတဲ့ နေရာဖြစ်ဖို့ပါ။ MEF members များ၊ ဆန္ဒပြုရွေးချယ်ပေးကြပါဦး ခင်ဗျား။
စားစရာသောက်စရာတွေဝယ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောလို့ရမယ် အပန်းဖြေလို့ရမယ့် Botanical Garden လိုမျိုး တနေရာရာကို သွားမယ်ဆိုရင်ကော...
အဲလိုဆိုရင်တော့ ကိုထွန်းကတော့ စိတ်ကောက်တော့မယ်ထင်တယ်.. :D
(ဆိုင်မှာပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုချစ်တီးပြောသလို ကိုထွန်းပဲ ရွေးလိုက်ပါဗျာ...အတက်နိုင်ဆုံးလာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်...)
ကိုချင်းတွင်းသားပြောသလို စားစရာသောက်စရာတွေဝယ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောလို့ရမယ် အပန်းဖြေလို့ရမယ့် Botanical Garden လိုမျိုး၊ West coast, East coast နဲ့ Chinese garden အစရှိသလိုနေရာတွေလည်းကောင်းပါတယ်။ အဖျော်ယမကာပုလင်းတို့၊ ခွက်တို့၊ ရေဘူးတို့ ဆွဲလာလို့လည်းရတယ်လေ။ :bump2:
ကိုချင်းတွင်းသားပြောသလို စားစရာသောက်စရာတွေဝယ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောလို့ရမယ် အပန်းဖြေလို့ရမယ့် Botanical Garden လိုမျိုး၊ West coast, East coast နဲ့ Chinese garden အစရှိသလိုနေရာတွေလည်းကောင်းပါတယ်။ အဖျော်ယမကာပုလင်းတို့၊ ခွက်တို့၊ ရေဘူးတို့ ဆွဲလာလို့လည်းရတယ်လေ။ :bump2:
နေသာမယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာလေးတွေက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
နှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ စလုံးရဲ့မိုးလေ၀သအရ မိုးများလာတာကိုတော့ ထည့်စဉ်းစားရမယ်ထင်တယ်နော်။ ပြေးပေါက်မှားနေမှာစိုးလို့ ။
ဒါနဲ့ စလုံးက MEF ဖိုရမ်မိသားစုတွေ သွေးအေးနေကြတယ်ထင်တယ် ... ကိုထွန်းရေ
'သွေးပူအောင်' ' ဆေးကူ' ကြတာပေါ့ ဆရာချစ်ရေ...ကဲ စ လုံးမှ ဖိုရမ်မာတွေရေ.. တွေ့ဆုံပွဲအတွက် အရေးတယူနဲ့ ဘေးကူ ပေးကြပါဦး ခင်ဗျား။
ခု အ၀ါလိုင်းလဲ ပေါက်ပြီဖြစ်တဲ့ Labrador Park ဆိုရင် မကောင်းဘူးလား.. အသားကင်လုပ်ပြီးစားလို့ရတယ်လေ.. ကြာဆံကြော်တို့ဘာတို့နဲ့.. အကုန်ရယ်ဒီမိတ် မှာလို့ရတယ်.. လာပို့ဆိုရင်တောင် နေရာအတိအကျ လာပို့တယ်။ ကျယ်ကျယ်-၀န်းဝန်း ရှိတယ်။ P.S ပင်လယ်ကမ်းခြေပဲ.. ။ ကျွန်တော်ကတော့ သမီးက အရမ်းဆော့လို့ ကလေးကူထိန်းပေမယ့် သူရှိရင် လာမယ် (ဥပမာ သတို့သမီးလောင်း တို့ဘာတို့က ထိန်းပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့) :P
ခု အ၀ါလိုင်းလဲ ပေါက်ပြီဖြစ်တဲ့ Labrador Park ဆိုရင် မကောင်းဘူးလား.. အသားကင်လုပ်ပြီးစားလို့ရတယ်လေ.. ကြာဆံကြော်တို့ဘာတို့နဲ့.. အကုန်ရယ်ဒီမိတ် မှာလို့ရတယ်.. လာပို့ဆိုရင်တောင် နေရာအတိအကျ လာပို့တယ်။ ကျယ်ကျယ်-၀န်းဝန်း ရှိတယ်။ P.S ပင်လယ်ကမ်းခြေပဲ.. ။ ကျွန်တော်ကတော့ သမီးက အရမ်းဆော့လို့ ကလေးကူထိန်းပေမယ့် သူရှိရင် လာမယ် (ဥပမာ သတို့သမီးလောင်း တို့ဘာတို့က ထိန်းပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့) :P
Labrador Park တဲ့ ကိုငယ်ကတော့ အဆိုပြုသွားပြီ။
ကောင်းပါ၏ ၊ ကျနော်လဲမရောက်ဖူးသေးဘူး ၊ ခလေး ကူထိန်းဆိုလဲ ထိန်းပေးပါ့မယ် ၊ MEF camera man (မှတ်တမ်းဒါရိုက်တာ) ကတော့ မလာလို့ဘယ်ဖြစ်ပ့ါမလဲ ။
စလုံး MEF မန်ဘာတွေ (မိန်းခလေးတွေ) JME တို့ ၊ KPZ တို့ (စသည် စသည်....) ငြိမ်ချက်သားကောင်းလေနေရဲ့ .....
Labrador Park ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ တကွ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အပါအ၀င် မူရင်း ၀က်ဆိုက်တော့ .... ဒီနေရာလေးမှာပါ။ (http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_visitorsguide&task=naturereserves&id=48&Itemid=75)
streetdirectory မှာ နေရာအတိအကျ ကြည့်ချင်ရင်တော့ အောက်ကပုံလေးကို Click လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ သမီးက အရမ်းဆော့လို့ ကလေးကူထိန်းပေမယ့် သူရှိရင် လာမယ် (ဥပမာ သတို့သမီးလောင်း တို့ဘာတို့က ထိန်းပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့) :P
သမီးကို ထိန်းပေးဖို့ သတို့သမီးလောင်း ဆိုတာကိုတော့၊ သိပ်မရှင်းဘူး။
Labrador Park လည်းကောင်းတာပဲ။ လူရှင်းတယ်...အေးဆေးတယ်..ပြီးတော့ ဓါတ်ရထား...အဲလေ..MRT ဘူတာနဲ့ နီးတယ်။ ကောင်းပါတယ် ကိုငယ် ရေ...သမီးက အရမ်းဆော့ကစား တဲ့အခါ၊ ကလေးချစ်တတ်တဲ့ MEF က ဦးဦးတွေ၊ တီတီတွေ၊ မမ တွေက၊ အတူတူ ကူထိန်းပေးပါလိမ့်မယ်။
မကြာခဏ အလွတ်သဘောဆုံကြတိုင်း၊ တွေ့နေကျ MEF အမာခံတွေဖြစ်တဲ့ အကိုဒိ၊ ကိုချင်းတွင်းသား၊ နွေဦး၊ စု ၊ အေး၊ ပစ်ကလေး၊ ကိုဖြိုး၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ KPZ နဲ့ ကိုတာရာတို့ ဗရော်နီကာတို့ အသိဆုံးပေါ့လေ။
ဂျွန်မိုးအိမ်၊ တူမတော် နွေဦး၊ ကိုဖြိုးမောင်တို့လည်း Face book မှ တဆင့်၊ သိရှိကြောင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ နွေဦးလာရင် နွေဦး မွေးစားသမီးလေးလည်းပါမှာမို့ ကိုငယ့် သမီး ကစားဖော် ရပါလိမ့်မယ်။ MEF ဟာ မိသားစုအဖွဲ့အစည်းမို့၊ မိသားစုအလိုက် ချီတက်ကြတာပေါ့။ west coast နဲ့ Labrador Park ဟာ အနီးကလေးမို့၊ ကိုစည်သူအောင် ကိုလည်း ဇနီးနဲ့ အတူ၊ လာစေချင်ပါတယ်။
Labrador Park မှာ ဆုံကြမယ်။ အချိန် နဲ့ နေ့ရက်ကို ရွေးပေးကြပါဦးခင်ဗျား။
သွေးမအေးပါဘူး အစ်ကိုချစ်သီးရေ..။ ဗေထိဆို ထကချင်တဲ့အထဲမှာ အေးက ထိပ်ဆုံးကပါပါတယ်..။ နိုဝင်ဘာထဲမှာတော့ အဆင်ပြေမယ်မထင်ဘူး ခင်ဗျာ..။ အေး စာမေးပွဲရှိတယ်..။ လကုန်မှကိုပြီးမယ်..။ လာလည်း အေး စိတ်အေးအေးနဲ့ပျော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး..။ စာပူမိလို့လေ..။
၁၀ လပိုင်းထဲမှာဆို ဘယ်လိုနေနေ ရအောင်ပါမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်..။
ဖိုရမ်ကမရောက်တာကြာပြီ..။ တော်တော်လန်းနေပါလား..။ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ့်မိသားစုကတော့ မြန်အင်ယာမိသားစုပဲလေ..။
ငြိမ်ချက်သား ကောင်းတာ မဟုတ်ပါဖူး..။ လှုပ်ကို မလှုပ်နိုင်လို့ ငြိမ်နေရတာပါ..။း(
ရုံးပိတ်ရက်၊ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အရေးပေါ်အလုပ်များ မပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ မလာမဖြစ်ကို လာမှာ..။
စကားမစပ်.. ကို chan ရဲ့ ကြာဇံကြော်ကို မမေ့သေးဖူး :P
နိုဝင်ဘာထဲမှာတော့ အဆင်ပြေမယ်မထင်ဘူး ခင်ဗျာ..။ အေး စာမေးပွဲရှိတယ်..။ လကုန်မှကိုပြီးမယ်..။
အသားကင်လုပ်ပြီးစားလို့ရတယ်လေ.. ကြာဆံကြော်တို့ဘာတို့နဲ့.. အကုန်ရယ်ဒီမိတ် မှာလို့ရတယ်.. လာပို့ဆိုရင်တောင် နေရာအတိအကျ လာပို့တယ်။ ကျယ်ကျယ်-၀န်းဝန်း ရှိတယ်။ P.S ပင်လယ်ကမ်းခြေပဲ.. ။
29.10.2011 (စနေ)(or) 30.10.2011 (တနင်္ဂနွေ) တရက် ရက်ဆိုရင် အဆင်ပြေကြမလား မသိဘူး ။ အဆင်ပြေ မပြေ ပြောသွားပေးကြပါအုံး ။
စားဖို့အတွက်က ကိုငယ်မှာထားပေးလို့ရမလား ။ နောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း အမေရိကန်စတိုင် ပြန်ရှင်းကြတာပေါ့။
သောက်ဖို့အတွက်တော့ ကိုထွန်း ကိုယ့်ဟာကို စီစဉ်မှရမယ်နော် ။
လူဦးရေ တွက်လို့ရအောင် နီးစပ်ရာ မန်ဘာသူငယ်ချင်းတွေကိုလဲပြောပေးကြပါအုံး ။ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုသွားကြသော စလုံးက MEF မိသားစုများ တခုခုရေးသွားပေးခဲ့ကြပါအုံးဗျာ။
"ဆေးကူ" မည့်ကိစ္စအတွက် ဘေးလူနဲ့ အပေးအယူလုပ်မနေပါနဲ့ ကိုကြီးရယ်၊ "အစ်မ K" ရဲ့ ဆိုင်က ပြေးယူလိုက်ရတာပဲဟာနော်။
မေ့နေမှာစိုးလို့ အဝေးလူက ဖေးကူပြီးသတိပေးတာကို ဘေးလူတွေမသိပါစေနဲ့ လို့လည်းမှာချင်ပါတယ်။
မှာသာမှာရ တစ်ခါနှစ်ခါမက ကြုံဖူးထားတော့
ဒီလူနဲ့ ဒီလူတွေ နောင်လည်းသိမယ့်အတူတူလေလို့တွေးပြီး မနှေးအမြန် သူအကုန်ချပြ မှာကို တွေးပြီး ပူရပြန်သေးတယ်။
အော် ကိုကြီးကလေ ဂလိုနီးလှတဲ့ အချိန်ရောက်နေတာတောင် ရာဇ၀င်ထဲကသတို့သမီးနဲ့အပြိုင်နာမည်ကြီးနေတဲ့ MEF က သတို့သမီးလောင်းကို ဘယ်သူလဲ သတိမရပြန်ဘူး၊ သတို့သမီးလောင်းက ကလေးထိန်းမထိန်းတော့မသိဘူး ကလေးတွေကြိုက်တဲ့စားစရာတွေ ဆိုင်ကနေ ယူလာပေးမှာတော့သိတယ်လေ။
အေရာလာမှ၊ အဖြေရှာရသမို့ ကျေးဇူး ကဋေကဋာ၊ အသေအခြာတင်မိပါတယ်...အေရာ..ရေ။
ဒီဇင်ဘာ သတို့သမီးမို့ ရုတ်တရက်၊ မသေခြာအဖြေရှာမရခဲ့ပေမယ့်၊ ရှင်းပြသေခြာ၊ အဖြေရှာပြမှ၊ ဘယ်သူဆိုတာ၊ လင်းပဝေဆာ၊ သိရပါတော့တယ်။
အကုန်ချပြသူ ဒူဒူ တဦးကတော့၊ စ လုံးမှာ မရှိသူတဦးပေမို့၊ ရိပ်ကာဖမ်းကာ လှစ်ဟာချပြပေမယ့်၊ မသိသူ..သိသူတွေခမြာ၊ ထင်မိထင်ရာ၊ ထင်တတ်ပါသတဲ့။
စနေဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အတွက် အဆင်မပြေလှဘူး...
နေ့တ၀က်ရုံးတက်ရမယ်.. ပြီးတော့ ညနေ၆နာရီကနေ ၈နာရီကို အပတ်တိုင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကြက်တောင်ရိုက်ဖို့လဲရှိတဲ့အတွက်ပါ...
နဲနဲပိုတိကျမယ့် proposal တခု ထပ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးကြပါအုံး ။
နေရာ .... Labrador Park
Park ထဲမှာ အဆင်ပြေမယ့် နေရာအသိအကျကတော့ ကိုငယ် ကိုဘဲမေးရမယ်ထင်တယ်။ ရောက်ဖူးတဲ့သူမို့လို့ ။
နေ့ရက် .... 30.10.2011 (တနင်္ဂနွေနေ့)
အချိန် ..... ??????
ကဲ ဝေးကွာနေသော ပစ်ထားမိသော ဖိုရမ်မှ ဦးလေးကိုကို မမ ညီမလေးများအားလုံး
ပစ်ထားချင်လို့ ပစ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ မိုးလင်းက မိုးချုပ် အလုပ်တွေကို ရှာပီး ရှုပ်နေလို့ပါ။ ကူထိန်းပေးမှာပေါ့ ကိုငယ်ရယ် စိတ်ချ .....
၂၉ စနေဆိုမအားလို့ပါ။ ဆိုင်မှာ တူတူ အလုပ်လုပ်မယ့် ညီမလေး က ၇န်ကုန် ပြန်မှာမို့။ အောက်တိုဘာ ၃၀ တနင်္ဂနွေဆို လာဖြစ်အောင် လာပမယ်။ ကိုကြီးထွန်းအပါအ၀င် သောက်လိုသူများအတွက် ဘီယာတစ်ကဒ် ခွက် ရေခဲ အားလုံးကို Sponser ပေးပမယ်။ ကိုကြီးထွန်းရေ မွှေးဒန်ပေါက်လေးနဲ့ဆို ကောင်းဝူးလား ဈေးလဲသက်သာ အရသာလည်းရှိ ... အဆင်ပြေမယ် ဆို အောက်တိုဘာ ၃၀ နေ့လည်လောက် စလိုက်ရအောင် ...
ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက်နေ့အတွက် ဖိုရမ်မှ ညီအကို မောင်နှမများအတွက် လောလောဆယ် ၁၀ိုင်း သီးသန့်ချန်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀ိုင်းလောက်မှ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ကေပီဇက်ကို ချီးမြှောက်အားပေးမယ့်သူ စာရင်းအတိအကျတော့ သိချင်ပါတယ်။ သောက်ဖို့အတွက်ကတော့ ဘာမှ မပူပါနဲ့ ပုလင်းတွေ အိမ်မှာ စီထားပါတယ်။ ဟဲဟဲ အမူးလွန်ပီး မပြန်နိုင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့ ခန်းမရှေ့က ကေပီဇက် အိမ်ပါ။
ဖိုရမ်မှ မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကို လွမ်းဆွတ်နေပါကြောင်း
အခုတလော ပွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက် အရှိန်တွေတက်နေပေမယ့် အိမ်သူသက်ထားက ကဲရီးအွန်ပါတဲ့ဗျား (ဇနီးအမည်က "သက်ထား" မဟုတ်ပါ။)
ဒီတော့ MEF တွေ့ဆုံပွဲမှာလည်း မလွတ်တမ်းပါဝင်ဆင်နွှဲရဦးမှာပေါ့။
အေး တူမ ယူမြည်းဖို့ ဂျူတီဖရီးဆိုင်က ၀ိုင်တစ်လုံး အသုံးမပြုပဲ ချန်ထားပါတယ်။
တစ်ကယ်သောက်ချင်လျှင် အလည်တစ်ခေါက်လာဖို့ အေရာကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
မွှေဒံပေါက်လေးဆိုရင်တော့ BBQ pit book လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့.. ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ ခင်းစားကြရုံပဲ..သူလဲ အော်ဒါမှာလို့ရပါတယ် လာပို့မပို့ တော့ သေချာမသိဘူးဗျ... ၃၀ ရက်ဆို အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီဇင်လာ ၂၅မှာ အမှန်အကန်စားသုံးမည့်သူများအဖြစ်စာရင်းပေးရမှာ အားလည်းနာတယ်၊ ခင်လည်းခင်တယ်လေ .....
!@#$% ..... !@#$% ........
နောက်ထပ်ခင်တဲ့သူတွေ သတင်းပို့လို့ရအောင် စာရင်းတို့ကာ စလိုက်မယ်
လာထား..။ ချောကလက်လေးတွေ တန်းစီ..။
ကိုကြီးထွန်းအပါအ၀င် သောက်လိုသူများအတွက် ဘီယာတစ်ကဒ် ခွက် ရေခဲ အားလုံးကို Sponser ပေးပမယ်။ ကိုကြီးထွန်းရေ မွှေးဒန်ပေါက်လေးနဲ့ဆို ကောင်းဝူးလား ဈေးလဲသက်သာ အရသာလည်းရှိ ... အဆင်ပြေမယ် ဆို အောက်တိုဘာ ၃၀ နေ့လည်လောက် စလိုက်ရအောင် ..
ကောင်းလိုက်တဲ့အကြံပါပဲ ညီမ K ရေ။
အကိုဆရာက အပိုအသာ၊ ကူတော့လည်း ကျေးဇူးတင်ရပါသတည်း။ ဝိုင်ကို ဝိုင်ခြင်းထပ်မှ၊ မြတ်မှာမို့ ဝိုင် (၃)လုံးကို၊ ဆေးလိုထားကာ သုံးစေဖို့၊ ဘေးကူပါ့မယ်။
အေးညီမ သဘောကျစေဖို့ ချောကလက်လေးကိုလည်း၊ ခေါါခဲ့ပါမယ့်။
၃။ 'ကိုထွန်း' နဲ့ သွားလေရာပါသူ 'မောင်သောမတ်စ်ထွန်းသူ' တို့ပါခင်ဗျား။
အခုလို ဖိတ်ကြားကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါရှင်
သီးခံခွင့်လွှတ် နားသောတ ဆင်ပေးကြပါ (အဲ ဘာမှလဲဆိုင်ဘူးနော်)
သီးခံ နားလည်ပေးကြပါရှင် လို့ပြောကြားရင်း
အဲဒီ့နေ့မှာ တီးဝိုင်းစီစဉ်ထားတာကြောင့် သီချင်းလေးများ ဆိုချင်ခဲ့ရင်လည်း ကြိုပြောပါနော် :P
ညီမ K ရေ၊ အကို အင်ဒရူး လာလည်မှ ဆိုတီးသံသာ တပွဲလောက်လုပ်တာပေါ့။ ရက်နီးလာပြီမို့၊ အဖျက်အစီး၊ တရံမရှိစေဖို့၊ ဖန်တည်းကာ၊ စာရင်းတို့ပါတော့မယ်။ အမူပိုသူ ဒူဒူ ကလည်း၊ မနှေးအမှီလှမ်းကာ၊ ဘေးကူဖို့ ဆေးယူလာကာ၊ မြန်းပါ့မယ်လို့၊ ဆိုလာပါတယ်။
၁။ ဆရာချစ် နဲ့ မိသားစု
၃။ အသင့်ပြင် အဲလေ...ကိုထွန်း နဲ့ သောမတ်စ်ထွန်းသူ
၅။ ကိုငယ် နဲ့ မိသားစု
၆။ ဆရာထွန်းအောင်ကျော် နဲ့ မိသားစု
၇။ ညီမ K နဲ့ ကိုအောင်ကျော်မြင့်
၈။ တူမတော် နွေဦး နှင့် ....
၁၃။ ညီမ ဂျွန်
၁၄။ ကိုတာရာ နဲ့ တူမတော် ဗရော်နီကာ
၁၅။ ကိုဖြိုးမောင် နှင့်....
၁၇။ ကိုစည်သူအောင် နှင့် ဇနီး
၁၈။ ဒူဒူ ဆိုပြီး၊ တွေ့မိပါတယ်။
ဒီ့အပြင် စ လုံးမှာနေပြီး၊ MEF မှာရေးသားနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အားလုံးအတူ ဆုံစေဖို့၊ လာစေချင်ပါတယ်။ ဒန်ပေါက်ပွဲ (၅၀) သတ်မှတ်ပါ့မယ်။ အမာခံများမှ အအေးတယောက် တပုလင်းယူခဲ့ကြပါ။ ဝိုင်နဲ့ရောပြီး ကော့တေးလေးဘာလေး အဲလေ...မှားလို့၊ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆုံကြရအောင်။
အခုရေးထားတဲ့ List က 30.10.2011 တွေ့ဆုံကြမယ့်စာရင်းလား ကိုထွန်းရေ ....
အားလုံးနဲ့ confirm လုပ်ပြီးပြီလား ၊
နေရာကလဲ Labrador Park လို့ confirm လုပ်ပြီးသွားပြီမို့ ....
အချိန် confirm လုပ်ဖို့ရန်ကျန်ရှိနေသေးပါကြောင်း ...
မ KPZ က ဖိတ်ထားတာနဲ့ topic ၂ ခုရောသလိုဖြစ်နေလို့ ။
ဒါနဲ့ KPZ က 25.12.2011 မင်္ဂလာဆောင်လားဟင် .... တခြားသူတွေနဲ့လဲ အဆက်အသွယ်မရှိလို့ မသိရဘူးဖြစ်နေတာ ....
ညီမရေ ... အဲ့ဒီနေ့ စလုံးမှာဘဲရှိနေရင်တော့ မဖြစ်မနေလာခဲ့ပါမယ်။ နေရာ နဲ့ အချိန်အတိအကျတော့ မသိသေးဘူးနော် ။
အခုရေးထားတဲ့ List က 30.10.2011 တွေ့ဆုံကြမယ့်စာရင်လား ကိုထွန်းရေ ....
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာချစ်ရေ...။ သေခြာဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားဆက်သွယ်ပြီး အသိပေးပါ့မယ်။ အများစုကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MEF မှတဆင့်၊ ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ပြီး အလွတ်သဘော၊ မကြာခဏ တွေ့ဆုံလေ့ရှိကျသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
တလက်စာတည်း၊ တောင်းပန်ချင်တာကတော့ အလွတ်သဘော၊ ဆုံကြသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ MEF ရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွေကိုဖြစ်ဖြစ်၊ မပျက်မကွက်လာသူ ကိုချင်းတွင်းသား ကိုပါ။ ကိုချင်းတွင်းသားရေ...ကျွန်တော်ရေးတင်လိုက်တဲ့၊ စာရင်းထဲမှာ နာမည် ကျန်ခဲ့တာကို၊ တောင်းပန်ပါရစေခင်ဗျား။
တလက်စာတည်း၊ တောင်းပန်ချင်တာကတော့ အလွတ်သဘော၊ ဆုံကြသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ MEF ရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွေကိုဖြစ်ဖြစ်၊ မပျက်မကွက်လာသူ ကိုချင်းတွင်းသား ကိုပါ။
တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးဗျာ.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ သေချာပေါက်လာမယ်လို့မ ပြောမထားသေးတာပဲ...
တွေ့ ကြဘီဆိုမ သောင်းကျန်းကျတာပေါ့.. :D :D :D
အားလုံးတူ နွှဲရအောင်၊ ဒီမောင်မှာတွေးမနေတော့ပါဘု
လုပ်လက်စရှိရင်တောင်၊ ခဏထားကာ အရောက်လှမ်းခဲ့မယ်
ဒူဒူ၊ ဧရာ၊ ကိုဒိနဲ့ ကိုထွန်းတို့ကို အားကျလို့
သူများရေးသလို လိုက်ရေးလိုက်တာပါ။ အနုပညာဓါတ်ခံနဲလှတာမို့ မှားနေရင်လည်း ရွှေစိတ်တော် မငြိုကျပါနဲ့ဗျာ။
Uniform လေးတွေ ဝတ်ဆင်လာဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဦးထွန်းရေ... နောက်တပတ်ထဲမှာပဲ ကျွန်တော် ကုလားပြည်ကို ပြန်သွားရအုံးမှာ ဖြစ်လို့ ဒီပွဲကို တက်နိုင်တော့မှ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား... :confuseds:
"အစ်ကိုပွ" ပြည်တော်ပြန်ပေမယ့် "ဘရီနော်" ကျန်ဦးမယ်မဟုတ်လား။
မွှေဒန်ပေါက် ဆိုလား မွှေး ဒန်ပေါက်ဆိုလား အေ၇ာတို့လည်းစားချင်ပါ၏။
ဒါပေသည့် အလုပ်မရှိတော့လည်း တစ်ကူးတက မလာဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။
ဖိတ်ခေါ်သူတွေကို ကျေးဂျူးဂဘာ လို့ပြောရင်း ငြင်းရပေမယ့်
အလုပ်ပေါ်လာလျှင်တော့ အဟုတ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ တစ်ကျွန်းမြေကို အလွမ်းပြေရောက်ချင်ပါသေးတယ်။
အချိန်လေးကို တစ်ချက်လောက် ပြောကြပါဦး...
ပြောဖို့ခက်နေတယ်ဆိုရင်လဲ ကျွန်တော်ကပဲ စလိုက်ဦးမယ်...
ညနေ ၄ နာရီ ဒါမမဟုတ် ၅ နာရီလောက်ဆိုရင်ကော...
ပြီးတော့ အစီအစဉ်တွေက ဘယ်လိုတွေရှိလဲ မတိဘူး...
မသိတသိနဲ့ စလိုက်ပြီ.... :P :P :P :P :P
အချိန်လေးကို တစ်ချက်လောက် ပြောကြပါဦး...
ပြောဖို့ခက်နေတယ်ဆိုရင်လဲ ကျွန်တော်ကပဲ စလိုက်ဦးမယ်...
၃ နာရီလောက် အနဲဆုံး လူ စစုမှထင်တယ် ။ ပန်းခြံထဲဆိုတော့ ဘယ်အချိန်အထိနေလို့ရလဲမသိဘူး ။
အစီအစဉ်တွေကတော့ တွေ့ကြမယ် ၊ စကားတွေပြောမယ် ၊ စားသောက်မယ် ... တခြား ဘယ်လိုစိတ်ကူးများရကြပါသေးလဲ ။
ကျနော်လာမယ် အကိုရာဘယ်မှာပဲ လုပ်လုပ် ကျနော် အရူးကွက်နင်းပီး ကျောင်းရယ် အလုပ်ရယ် ဂိမ်းရယ်နဲ့ ဒီဖိုရမ်ပေါ် မရောက်တာ နှစ်ပေါက်တော့မယ် အကိုဆေးတာ ကူလိုက် လာပီးသားပဲ (ဟီးဟီး ဝါထွက်ပီလေ့ နော့်)
မကေပီဇက် ကိုလဲ မေ့ချင်ယောင် ဆောင်ထားတာ ကြာပေါ့....
တာရာမရှိရင် ဗရော်နီကာ ခမျာ၊ အားငယ်ရှာမှာမို့၊ သီးခံနားလည်ရပါတယ်။ အရေးပေါါလာတိုင်း အပြေးလာရှာသူ MEF မှ တာရာနဲ့ ဗရော်နီကာ ဟာ၊ အားကိုးရသူတွေမို့ ဒီတခါတော့ ခွင့်လွှတ်ရပါသတဲ့။
တခါ ထမင်းချက်၊ ဟင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊ ပုဂံဆေး၊ အိမ်ရှင်း၊ မီးပူတိုက်၊ ဇက်ကျောဆွဲ အဲလေ...over sea ဆိုလား၊ အလုပ်နဲ့ ခဏခဏသွားနေရလို့ သိပ်မတွေ့ဖြစ်ပါဘူး။ သူ့ ဖုန်းက ဆက်လိုက်တိုင်း over sea tone ပဲကြားရတာများတယ်။ ပြန်လာလည်း မလက္ကာသွားပြီး၊ မာလကာသီးစားရတာနဲ့၊ ပီနန်းသွားပြီး ပုလောပီနံဥ မီးဖုတ်စားရတာနဲ့၊ JB မှာ၊၊ DJ လုပ်ရတာနဲ့၊ အားကို မအားပါဘူး။ ဟိုတလောကလည်း ဘာလီမှာ အသာကြည်နေတယ်ဆိုပဲ။ တခါ လမ်းမှာတွေ့လို့ အားကျတာနဲ့ ပြောလိုက်တယ်.. တသက်လုံး 'ဟန်းနီးမွန်း' ပဲထွက်နေကြမှာလားလို့။
ကျနော်လာမယ် အကိုရာဘယ်မှာပဲ လုပ်လုပ် ကျနော် အရူးကွက်နင်းပီး ကျောင်းရယ် အလုပ်ရယ် ဂိမ်းရယ်နဲ့ ဒီဖိုရမ်ပေါ် မရောက်တာ နှစ်ပေါက်တော့မယ် အကိုဆေးတာ ကူလိုက် လာပီးသားပဲ (ဟီးဟီး ဝါထွက်ပီလေ့ နော့်) .
လိပ် ခမျာ၊ နားမှာ စိန် တတ်ပြီးကာမှ မလှမ်းမကွာ အရောက်လာကာ ရတီ စစ်ဖို့လိုပါသတဲ့။
ဟိုဘာတဲ့...play boy သန်းနိုင်ရဲ့ သီချင်းတပုဒ်လိုပေါ့။ ဇော်ဝင်းထွဋ်လည်း ဆိုဖူးပါတယ်။ နင် ပယ်လယ်...ငါ့ရွက်လှေ၊ ပျော်ရွှင်ရောင်စုံ က နေတယ်ဆိုလား။ ပင်လယ်ပြင်မှာ သဘေ်ာမှောက်သလို၊ စက်ာပူရောက်မှ Main Engine စက်မကြီးက cylinder head ဆလင်ဒါဟက်ကလေးတလုံးလဲခိုင်းလိုက်ပါတယ်၊
တိုင်ကီလောက်ရှိတဲ့ ဆလင်ဒါ liner လိုင်နာကလေးပါ ကွဲထွက်သွားလို့ ကိုထွန်းခမျာ၊ သောက်နိုင်၊ မစားနိုင်ဖြစ်ကာ (၅) ရက်လောက်၊ ပျော်ရွှင်ရောင်စုံ မ ကနိုင်တော့ပါဘူး။ :boom:
ဒီနေ့တော့လည်း ငါဟာရွက်လွှင့်...ဘာညာကွိကွ ဆိုနိုင်သွားပါပြီ။ ပင်လယ်ပြင်ရောက်မှ မှောက်ကျကွာဆိုပြီး၊ ဖျောင်းဖျထားပါတယ်။ နေ့ခင်းက အေး ဖုန်းဆက်ချိန်အထိ၊ စက်ခန်းထဲမှာ တာနောယက္ခ၊ မယ်သီတာတို့နဲ့ အဲလေ...ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ နပမ်းလုံးနေရတာပါ။ တူးမတ်ကြီးတိုက်လား too much tight lah ဆိုပြီး၊ ကိုထွန်းအော်သံကို ဖုန်းထဲကနေ အေး ကြားတော့ ဒို့ အကိုဘာသာစကား အဆန်းတွေ နဲ့ပြောနေပါလားလို့ မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။
တူမတော် နွေဦးလာပါလိမ့်မယ်။ နွေဦးနှင့် အတူ၊ သွားလေရာပါတတ်သူ တူမတော် စု သေခြာပါတယ်။
မဆုံဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်လို့ အားလုံးနဲ့ဆုံဖြစ်အောင် ကျနော်လဲ လာခဲ့ပါမယ် ..... :D :yo:
ကဲ ပစ်ကလေးကရော၊ ဘယ်သူနဲ့အတူတူလာ...အဲလေ လာမှာသေခြာတယ်မဟုတ်လား။ မသောက်စားတတ်သူကို အကြံတောင်းရတာ၊ အားတော့နာပါရဲ့။ ကိုလိပ် ပါလာပြီဆိုတော့ ဝိုင် အစား ဝီစကီပြောင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ် ပစ်ကလေးရေ။ အကြံပေးပါဦး။
ကိုထွန်း သိပ်မကြော်ငြာနဲ့လေဗျာ။ တော်နေကြာ ဖိုရမ်အကြောင်းပြပြီး သောစားကြမလို့ဖြစ်နေဦးမယ်။ ကြိုက်တဲ့ဟာကို ယူလာခဲ့။ ပြီးရင် ကြိုက်တဲ့ဟာကို သောက်လိုက်ကြ။ ကဲပြီးရော မဟုတ်လား။
အရေးကြီးတာက အချိန် Confirm လုပ်ကြဦးဗျို့။ ဒံပေါက်လည်းမှာထားတယ်ဆိုတော့ နဲနဲစောစောလေးလုပ်ရင်လည်း ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ၃ နာရီလောက်မှ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း တခြား Light Food လေးစီစဉ်လိုက်တာ ပိုကောင်းမလားလို့။ နေ့လည်စာနဲ့ကပ်နေတော့ ဒံပေါက်မစားနိုင်လောက်တော့ဘူးထင်မိလို့ပါဗျာ။
ဆရာထွန်းအောင်ကျော်ကလည်း ကြိုက်တဲ့ဟာကို ယူလာခဲ့ဆိုပြီး၊ ရေယူလာမှ ဒုက္ခများနေမှာစိုးလို့ ကြေငြာရတာပါ။ ကျွန်တော် ရေ မသောက်တာကြာပြီဗျ။ ဆရာရေ ဆရာချစ်ပြောသလို၊ (၃) နာရီ မှာ စတာကောင်းပါတယ်။ လူစောင့်တာနဲ့ ဘာနဲ့ ရှိဦးမှာပါ။ ကျွန်တော်က အစာအိမ်ရှိတော့ ဗိုက် ခဏခဏ ဆာတတ်ပါတယ်။
ရက်နီးလာပြီမို့ အပြီးသတ်အစီအစဉ်နဲ့ တာဝန်ခွဲဝေပါ့မယ်။
ဒန်ပေါက်ကို ပွဲ (၃၀) သတ်မှတ်ပါ့မယ်။ ညီမ K က ဒန်ပေါက်မှာပေးပါ။ တလက်စတည်း ရေခဲ၊ အအေးဘူး၊ ရေဘူးတွေ နဲ့ ခွက်တွေကို၊ ညီမ K ကပဲ၊ အရောက်ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကိုထွန်းရဲ့ ဇနီး က ကျောက်ကျော (၂) ဗန်းတာဝန်ယူပါတယ်။ အကိုဒိ က ဝိုင် တလုံးတာဝန်ယူသလို ကိုထွန်း က ဝိုင် (၃) လုံးတာဝန်ယူပါ့မယ်။ ကိုဒိရေ မရိုမသေ wine opener လေးပါယူခဲ့ပါဦး။ အေရာ့ ဆီက သွားဌားရအောင်လည်း၊ ခရီးကအဝေးသားလေ။
အနော်ဘာယူလာခဲ့ပေးရဦးမလဲ... အားမနာနဲ့နော်... ယူလာနိုင်တာဆိုရင် ယူခဲ့မယ်....
အလားမား ဆီညှော်တို့...သိပ်မသေခြာပေမယ့် ဒူဒူ လာခဲ့ပါ့မယ်။ လေယာဉ်နဲ့ပေါ့လေ။ အန်တီမူမူ့ကို ကျောက်ကျောထိုးခိုင်းတဲ့အပြင် စန္ဒီတို့အိမ်က အိုးဌားပြီး၊ ဒန်ပေါက်ချက်ခိုင်းပါလား၊ မမအေးနဲ့ မမဗရော်နီကာတို့ အသိမို့ အန်တီမူမူ့ လက်ရာကိုပြောတော့ ပါဘူး။ မမအေး ကျောင်းတက်ရင် စားဖို့ ချဉ်ပေါင်ကျော် ကျော်ထည့်ပေးတာလည်း ဒူဒူ လုံးဝမပြောပါ။ ဟီဟိ။ အန်တီသီတာ့ ကိုပါဖိတ်ပါလား။ သမီးမရှိရင် အမေက၊ လူစားလာ...ဦးရီးနဲ့ သီချင်းတွေ ဆို... အန်တီမူမူက လက်ခုတ်တီး၊ ရှယ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် သားကောင်းတလက်၊ မျောက်ပေါင်းတထောင်မွေးထားသူ အန်တီမူမူ ချက်နိုင်တော့မယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီနေ့လည်း မိဘဆရာ တွေ့ဆုံပွဲသွားကာ မျောက်ပေါင်းတထောင်ကိစ္စကို Baptist Church မှာ၊ တနာရီလောက် အတန်းပိုင် ဆရာမနဲ့ အာလူးပေါက်ပေါက်၊ ပြောင်းဖူး ပေါက်ပေါက်ဖောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပဲ။
အရေးကြီးတာက ဘဏ္တွာရေးနော်။ ဒူဒူ တွက်ကြည့်တယ်။ ဒန်ပေါက်တပွဲ ၆ ကျပ်၊ ပွဲ ၃၀ ဆို ၁၈၀၊ taxi ခက ၂၀ ဆိုတော့ ၂၀၀။ အအေးဘာညာကွိနဲ့ဆို ၃၅၀ လောက်ကုန်မယ်။ မမ K လည်း၊ ရတက်မပွားရအောင် ဦးရီးတို့တတ်နိုင်သလောက် မမK account ထဲကို၊ အလှူထည့်ကြပါလား။ ပိုတာကို MEF ရန်ပုံငွေအဖြစ်သတ်မှတ်ကြမယ်လေ၊ ကောင်းဖူးလား။ ဂရာစီးပါ ဆီညော်တို့နဲ့ ဆီညော်ရီတာတို့ရေ။
ကျနော့်မှာ ၀ိုင်ဖွင့်တဲ့ သွား အဲလေ ပစ္စည်း ရှိပါတယ် ကျနော်လဲ လိုရ မယ်ရ တလုံးဆွဲခဲ့ ပါ့မယ် များနေဘီလား မသိ။
အမကေပီဇက်ရေ သယ်ရမယ့် ပစ္စည်း တွေ များမယ် ဆိုတော့ ကျနော် လာထမ်း ပေးပါ့မယ် ကျနော့် ကို ကန်စွန်းရွက်နဲ့ ပေါက်ပေါက် ပေးပါ။
လေးပွကြီးမပါနိုင်ဘူးဆို စိတ်မကောင်းဘူး..။ ညီမငေးကို တစ်ယောက်တည်းကျ လွှတ်ချင်ဘူးလား..။
ဘဏ္တွာရေးက ပြသနာလို့၊ မထင်ပါဘူး ဒူဒူရေ။ ဦးရီး လက်ရှိပါဝင်နေရတဲ့ Myanmar Maritime Association နဲ့ AGTI Association ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း၊ စ မယ်ဆိုရင် စ လိုက်ကျတာပါပဲ။ အခုလည်း အကိုဒိနဲ့ ဦးရီးတို့ MEF တွေ့ဆုံပွဲ အတွက် Sponsored အနေနဲ့ တာဝန်ယူဖို့၊ တိုင်ပင်ထားပါတယ်။
လက်ရှိရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပန်းခြံရဲ့ သွားရေးလာရေးနဲ့ နေရာအနေအထားကို၊ သွားကြည့်တဲ့အခါ MRT station ကနေလမ်းလျှောက်သွားရသလို၊ အမိုးအကာမရှိတဲ့နေရာတခုရယ်လို့တွေ့မိပါတယ်။ နောက်တခုက လာပါ့မယ်လို့ အတိအကျဆန္ဒပြုသူ အရည်အတွက် သိပ်မရှိတာမို့၊ စာရင်းပြုတဲ့အခါ အခက်အခဲတွေတွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တမ်းဆုံကြမယ်ဆိုရင် ကိုထွန်းအိမ်မှာ လူ (၃၀) လောက်ဆုံပြီး၊ တွေ့ဆုံပွဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဆိုင်တဆိုင်မှာ၊ တွေ့ကြဖို့ပါပဲ။ အကြံပြုကျပါဦးခင်ဗျား။
လောလောဆယ် စလုံးရာသီဥတုအရ မိုးမရွာတဲ့နေ့က မရှိသလောက်ဖြစ်နေလေတော့ ပန်းခြံတို့ဘာတို့မှာ လုပ်လို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးနော်။ ဆိုင်မှာပဲ လုပ်တာက အိနြေ္ဒ ရမယ်နဲ့တူတယ်။ နောက်ပြီး ဘာမှ စီစဉ်စရာမလိုပဲ လူချည်းသွားလိုက်ရုံပါပဲ။ အဲဒါကတော့ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တာပဲလေ။ နောက်ဘဏ္ဍာရေးမှုးလည်း အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့။ ဟိုတခါ ကိုဖြိုး မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲလုပ်တဲ့ ဧရာဝတီ မှာ ဘွတ်ကင်လုပ်ထားလိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တာပဲဗျာ။ အဲဒီတာဝန်ကိုတော့ ဆရာထွန်းပဲ ယူလိုက်ပေါ့။ ဆရာထွန်းက ဆိုင်နဲ့ပိုင်တယ်ဆိုတော့ ပုလင်းလေးတွေသယ်လာတဲ့သူတွေကို ဆိုင်ရှင် အပြစ်မမြင်လေအောင်လည်း စကားခံပြီးတော့ ပြောထားလိုက်ဗျာ။ အဲလို ကိုယ့်ရိက္ခာနဲ့လာမှာဖြစ်လို့ Table ကြေးပေးရမယ်ဆိုလဲပေးတာပေါ့။ ဘဏ္ဍာရေးအတွက်တော့ အကိုတို့ချည်းပဲလဲ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ သူ့နေရာလေးနဲ့သူဝိုင်းဝန်းလိုက်ရင်ဖြင့် ၀န်သိပ်မပိတော့ဘူးမဟုတ်လားဗျာ။
ကျနော်တို့တတွေ ပြောလာလိုက်တာဖြင့်ပို့စ်တွေတော်တော်များနေပေါ့။ ခုချိန်ထိ ဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်ဘူးဖြစ်နေရင်တော့ မတော်ဘူးထင်တယ်ဗျာ။
နေ့ရက်- ၃၀.၁၀.၂၀၁၁ (တနင်္ဂနွေနေ့)
အချိန်-ညနေ (၃) နာရီ
နေရာ- ဧရာဝတီ စားသောက်ဆိုင်၊ ပနဆူလာ ပလာဇာ
သဘောတူလို့တက်ရောက်မဲ့သူများ ကျေးဇူးသာတင်သွားလိုက်ပါဗျာ။ ကျေးဇူးလေးတွေလိုချင်လို့ပါ။:D
ဘယ်ကိုပဲလာရလာရ အဆင်ပြေပါတယ်..။ မိုးမရွာတဲ့နေ့ကလည်းမရှိသလောက်ဆိုတာလည်း ဟုတ်တာပဲ..။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်ထဲထိုင်ရတဲ့ feel ထက်စာရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖီလင်ကိုတော့ ပိုသဘောကျတယ်..။
ဘယ်နေနေတော့ လာမှာပါပဲ..။ အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် ၀ိုင်းအကြံပေးကြပါဦး..။ နောက်တစ်ပတ်တွေ့တော့မှာ..။ ခုထိမပြီးပြတ်သေးဘူး..။ ဆတ်တငန့်ငန့်နဲ့..။
ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Sunday သာဆိုရင် သေချာပေါက်လာပါမယ်...
အေးပြောသလို အပြင်မှာဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့...
ပင်နယ်ဆူလာပလာဇာက ဆိုင် (၂) ဆိုင် အင်းလေး ဒါမှမဟုတ် ဧရာဝတီ ကိုအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ Reserved လုပ်ထားပါ့မယ်။ အချိန်ကိုတော့ (၃) နာရီအစား (၅) နာရီမှာ စဖို့ သတ်မှတ် ပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးသာလာခဲ့ကြပါ။ လိုအပ်ရင် ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပါတ် 9177 9033 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
လာမယ့်သူတွေ ကျေးဇူးလေးဖြစ်ဖြစ် ၀င်ပေးပေးသွားကြပါလား..။ လူကနည်းနေသလိုပဲ..။ မအားကြလို့လား (ဘာလား) မသိဘူးနော်..။
အစ်ကိုထွန်းတို့နဲ့ အလွတ်သဘောက ခဏခဏတွေ့ဖြစ်ပါတယ်..။ ဖိုရမ်အနေနဲ့တွေ့ဘူးတာ ရောက်တဲ့တစ်နှစ်ကျော်မှာ မရှိဘူးသေးပါဘူး..။
အခုကဖိုရမ်အနေနဲ့တွေ့ကြမှာမို့ အလွတ်သဘောတွေ့နေကျအရေအတွက်ထက် ပိုများများဆုံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..။ ဖိုရမ်ထဲက
ဘာနေနေ၊ ဘယ်field ကနေ ဖိုရမ်မောင်နှမတွေပါပဲ..။
အဲဒီတော့ ဖိုရမ်မိသားစုစိတ်လေးထားပြီးတော့ တတ်နိုင်သမျှ အချိန်အားရအောင် အားထုတ်ပြီးတော့ လာကြစေချင်ပါတယ်..။
ဆီညော်တို့နဲ့ ဆီညော်ရီတာတို့ရေ။ အခုလိုအပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်တော့လည်း၊ ကိစ္စတခုအထမြောက်သွားရပါတယ်။ ဂရာစီးပါ ။ အင်းလေး မှာ ပိုကောင်းမှာပါ၊ privacy ရှိသလို အေးပါတယ်။ ဖိုရမ်က ဆရာချစ်တို့၊ ဆရာထွန်းအောင်ကျော်တို့၊ ဆရာ အဲလေ...ဦးရီးတို့လည်း ဖိုရမ်အတွက်၊ အာလူးပူတီ၊ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်၊ မဆလာ၊ အာပလာ ဘာညာကွိကွဆွေးနွေးနိုင် သလို၊ လှေကားအဆင်းက မဆလာအတ် Masala Art ဆိုင်မှာလည်း၊ အာလူးဖုတ်နိုင်ပါသေးတယ်။
အန်တီမဝေကတော့ မွေးစားသားသောမတ်စ်ကို သူ့ဆိုင်မှာထိမ်းပေးမယ်လို့ပြောပါတယ် အမ K ရေ။ အမK လာဖြစ်အောင်လာနော်။ ပြီးရင် အန်တီမဝေဆိုင်မှာ ဝိုင် သွားသောက်ကြမယ်။
ဒီတခါတော့ ဒူဒူပြောသလို၊ အင်းလေး ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် အမည်နဲ့ ပင်နယ်ဆူလာပလာဇာမြေအောက်ထပ်က၊ အင်းလေးစားသောက်ဆိုင်, 111 North Bridge Road, #B1-07 (A/B) Peninsula Plaza, Singapore 179098 မှာ၊ Reserved လုပ်ပြီးပါပြီ။ အောက်တိုဘာ (၃၀) ရက်၊ တနဂ်နွေညနေ (၅) မှာစပါ့မယ်။ ကိုဖြိုး မဂ်လာဆောင်တုန်းက မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မိသားစုဝင်တွေအတွက်၊ ဧရာဝတီမှာ သီးသန့်ဧည့်ခံခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကလို၊ စက်ာပူရောက် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မိသားစုဝင်တွေ စုံစုံညီညီလာခဲ့စေချင်ပါတယ်။
စက်ာပူရောက် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မိသားစုဝင်များအားလုံးကို၊ တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါါပါတယ်။ အဝင်မှာ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် လို့ပြောလိုက်ရင် လမ်းညွှန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်ရင် အကိုဒိ +(65) 97250599 နဲ့ ကျွန်တော် ကိုထွန်း +(65) 9177 9033 တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ကျနော်လဲ စင်ကာပူမြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မိသားစုဝင်များတွေ့ဆုံပွဲ ကိုလာဖို့အားခဲထားတာ အရင်အခေါက်တွေတုန်းက အကြောင်းကြောင်း ကြောင့်မရောက်ဖြစ်ဘူး။ ဒီတခါတော့ ဖြစ်အောင်လာခဲ့မယ်ဗျာ။ ဖိုရမ်မောင်နှမတွေ နဲ့တွေ့ရတာပေါ့။
ဒီတခါတော့ ကိုစည်သူနဲ့ တွေ့ရတော့မှာပေါ့။ ကျေးဇူးပါပဲ ကိုစည်သူရေ။ ဆရာထွန်းအောင်ကျော်မှတ်သားထားတဲ့ phone နံပါတ်တွေအတိုင်းဆက်ပြီးပါပြီ။ အားလုံး confirm ပါ ဆရာရေ။ အကို TSO ဆိုတဲ့ ကျောင်းတုန်းက၊ ဆရာအကိုတင်စိုးကိုလည်း ဖိတ်ထားပါတယ်။ confirm ပါ။ တာရာတို့ကတော့ မလာနိုင်တဲ့အကြောင်း သက်သေခံ evidence အနေနဲ့ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်က ဓါတ်ပုံကို FB မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီတခါ ခွင့်လွှတ်လိုက်သလို၊ ကိုဖြိုးကလည်း အိမ်ပြောင်းမယ့်နေ့ဖြစ်နေတာမို့ ခွင့်လွှတ်ရပါတယ်။ တလက်စတည်း သားကလေးမွေးတော့မယ့် ကိုဖြိုးကို congratulation လို့ပြောပါရစေ။
ကိုဖိုးတာ၊ ညီမဂျွန်၊ ကိုဖိုးကို၊ တူမချစ်ပူတူး၊ ကိုချန်း၊ ကိုနေလင်းတို့ ကို၊ confirm လုပ်ပြီးသလို၊ ပစ်ကလေးက ကိုထွန်းခေါါရင် တယောက်တည်းမို့ မလာဘူးငြင်းနေလို့၊ ကိုထွန်းခေါါတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး ဖိတ်ထားရပါတယ်။ နွေဦး၊ စု နဲ့ အေး တို့ကလည်း သေခြာပါတယ်။ ကိုငယ့် ကို အကြောင်းကြားပေးကြပါဦးခင်ဗျား။
ကိုမင်းမျိုးဦးကတော့ သင်တန်းရှိနေတဲ့အတွက် ၇ နာရီလောက်မှရောက်မယ်ပြောပါတယ်ဗျာ။ ပြီးတာနဲ့လာခဲ့ဖို့လည်းမှာထားပါတယ်။
အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ နောက်ကျမယ်ဆိုလဲ အခုလို ရောက်လာနိုင်မယ့်အချိန်လေး ခန့်မှန်းသတင်းပေးထားလျှင် အဆင်ပြေပါတယ်၊ အရေးတကြီး ပြန်စရာမလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဆိုင်ရှင်ကခွင့်ပြုထားသ၍ စောင့်ပြီးတွေ့ဆုံပါ့မယ်ခင်ဗျား။
စလုံးမှာရှိမှန်းမသိတာရယ်၊ တက်ရောက်နိုင်မည့်အနေအထားရှိမရှိ မသိတာရယ်တို့ကြောင့် တိုက်ရိုက်မဖိတ်ကြားဖြစ်လိုက်တဲ့ ဖိုရမ်မိသားစုဝင်များအနေနှင့်လည်း သတင်းရရှိလျှင် ရင်းနှီးစွာလာရောက်တွေ့ဆုံပေးကြဖို့ လှိုက်လှဲစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဒါပေမယ့် ဆိုင်ထဲထိုင်ရတဲ့ feel ထက်စာရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖီလင်ကိုတော့ ပိုသဘောကျတယ်..။
အင်းနော် အမြဲတမ်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်နေကျသူများ ဆိုတော့လည်း လွတ်လပ်မှုအရသာကို ကောင်းကောင်းခံစားသိနေတာ သဘာဝကျပါတယ်လေ။
အခုရက်ပိုင်းရဲ့ မိုးလေ၀သအခြေအနေအရ ဆိုင်ခန်းထဲကို ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရပေမယ့် ရွှေမြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာပဲဖြစ်တာကြောင့် တူမ "အေး" တို့တတွေ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။
၀ါသနာပါလျှင် သီလို့ဆိုလို့လည်းရမှာပါ၊ ကလို့ခုန်လို့ဖြစ်မဖြစ်ကိုတော့ ဆန္ဒရှိသူများပါက မေးမြန်းတောင်းဆိုကြည့်ပေးပါမယ်။
နွေဦး၊ စု နဲ့ အေး တို့ကလည်း သေခြာပါတယ်။
အကြောင်းအရာ အခွင့်မသာ လေသောကြောင့် နွေဦး မနက်ဖြန်ပွဲကို မလာဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
နွေဦးမလာဖြစ်ပေမယ့် တွေ့ ဆုံပွဲကို
ဘယ်သူတွေရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း :car: :hat: :whistle: ၊
ဘာတွေ စားလို့ :tea:
ဘာတွေ ဆွေးနွေးနေကြပြီဖြစ်ကြောင်း :fencing:
LIVE လွှင့်သကဲ့သို့ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန် အမအေးနှင့် စုတို့ ထံ မှ ထောက်လှမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည် :spy: :photo: :cell: :phone: :)
စက်ာပူရောက် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မိသားစုရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ - ၂၀၁၁ ကတော့၊ ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်မအားလို့ မလာနိုင်တဲ့ ဖိုရမ်မာတွေကိုလည်း နောက်တခါ၊ အခွင့်အခါကြုံခဲ့ရင် လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါါပါတယ်။ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် လည်ပတ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အတွက်၊ အလှူငွေကောက်ခံခဲ့သလို၊ ထည့်ဝင်သွားကြတဲ့ ဖိုရမ်မာတွေကိုလည်း၊ ကျေးဇူးအထူးတင်မိပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံတွေ ကိုတော့ ဆရာချစ် တင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ နောင်ကိုလည်း မကြာမကြာတွေ့ဆုံပြီး၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် အတွက်၊ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာ၊ ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ကြပါစေလို့ တိုက်တွန်း၊ မျှော်လင့်ပါရစေခင်ဗျား။
တွေဆုံပွဲတုန်းက ရိုက်လာတဲ့ပုံလေးတွေကို အမှတ်တရတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုpigkalay နဲ့ ကိုထွန်း
ချင်းတွင်းသား၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော် နဲ့ ဆရာချစ်
KPZ တို့ စုံတွဲ
ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်
ကျနော်ရိုက်လာသလောက်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျန်တဲ့ပုံလေးတွေ ကို ဆရာချစ်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
တွေ့ဆုံပွဲနေတုန်းက ပုံလေးတွေ ထပ်တင်လိုက်ပါတယ်။
ဖိုရမ်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ ၊ ရှေ့ဆက်ရန်ခရီး ၊ ဘက်ဂျက်အခြေအနေများကို ခင်မင်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးဖြစ်ကြပါတယ်။
ဖိုရမ်ရဲ့လျှော့နည်းနေပြီဖြစ်တဲ့ Budget အတွက်စုပေါင်းအလှူငွေများထည့်ဝင်သွားကြပါတယ်။
ဒီအတွက်လဲ အားလုံးကို MEF ဖိုရမ် မန်ဘာများကိုယ်စား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း အလေးအနက်ပြောပါရစေ။
အခြေအနေ မပေးလို့မလာဖြစ်ကြတဲ့ မန်ဘာများကိုလဲ နောက်အခေါက်များ ဆုံတွေ့ကြရင် အရောက်လှမ်းခဲ့လာကြပါအုံးလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
(အလှူငွေ အတင်းမကောက်ပါဘူးနော် ၊ အတင်းခေါ်နေတာ အလှူငွေအတင်းကောက်ချင်လို့လို့ထင်နေမှာစိုးလို့ပါ)
တခုရှိတာက ဖိုရမ်ရဲ့ တဦးတည်းသော Professional ဖန်တီးရှင် Konge မလာနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ၊
အမှတ်တရ video clip လေးကိုတော့ ဒီတခေါက် မကြည့်ရတော့ဘူးပေါ့။
ကို pigkalay ၊ ကိုထွန်း ၊ လိပ်ကြီး (၀ဲမှယာ)
ကိုတင်စိုး ၊ ကို Deepblue (၀ဲဘက်အခြမ်း ၊ ၀ဲမှယာ)
လိပ်ကြီး ၊ ချင်းတွင်းသား ၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ၊ ကိုတင်စိုး (၀ဲမှယာ)
ကို Deepblue ၊ kosithuag ၊ အေး ၊ KPZ ၊ KPZ's ၊ ကို pigkalay (၀ဲမှယာ)
chit tee ၊ ကိုတင်စိုး ၊ ကို deepblue ၊ kosithuag ၊ အေး (၀ဲဘက်အခြမ်း ၊ ၀ဲမှယာ)
ချင်းတွင်းသား ၊ ကိုထွန်း ၊ KPZ တို့မောင်နှံ (ယာဘက်အခြမ်း ၊ ၀ဲမှယာ)
KPZ တို့မောင်နှံ ၊ ကို pigkalay ၊ ကိုထွန်း ၊ ချင်းတွင်းသား (၀ဲဘက်အခြမ်း ၊ အရှေ့မှအနောက်သို့)
chit tee ၊ ကိုတင်စိုး ၊ ကို deepblue ၊ kosithuag ၊ အေး (ယာဘက်အခြမ်း ၊ အနောက်မှအရှေ့သို့)
ကို deepblue ၊ kosithuag ၊ အေး ၊ MMO
ကိုဖိုးတာ's ၊ ကိုဖိုးတာ ၊ KPZ ၊ ကို pigkalay (၀ဲမှယာ)
လာမယ်ဆိုပြီး မလာဖြစ်နိုင်ခဲ့လို့...း(
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲလေးတစ်ပွဲပါ။ အထူးတစ်လည် ကြော်ငြာရမှာက ဖိုရမ်က တက်ကြွတဲ့ မန်ဘာကြီး ကိုဖိုးတာ တစ်ယောက် မဒီချောချောလေးနဲ့ အဆင်ပြေသွားတာပါပဲ ။ ( တစ်ချို့တစ်ချို့တွေကတော့ ရင်ထဲ ကြိတ်အားငယ်နေ၏ ) :P ကိုဖိုးတာရေ ကောင်မလေးကို ဖိုရမ်ထဲ ခေါ်ခဲ့ပါဦးနော်
ဒီတစ်ခေါက်တော့ မလာနိုင်လို့ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ ။ သတိတရ ဖုန်းဆက်တဲ့ ဆရာချစ်နဲ့ ကိုထွန်းကြီး ကို အရမ်းကျေးဇူးတင် မိပါတယ် ။ အဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဆေးရုံတက်နေလို့ ဆေးရုံရဲ့ ဧည့်တွေ့ချိန်နဲ့ ကိုက်နေလို့ပါ ။
ကျနော်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတချို့ နဲ့ ဗွီဒီယိုအပိုင်းအစတချို့ကို ပေါင်းပြီး မှတ်တမ်းဗွီဒီယိုလေးတခု စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်ထားပါတယ်။
ကျနော့်ကို အဝေးကနေ လမ်းညွှန်သင်ကြားပေးသူကတော့ ကိုငယ်ပေါ့ ။ video editing ကတော့ ကိုငယ်ပေးတဲ့ movie maker လေးနဲ့လုပ်ထားတာပါ။
သူများလုပ်တာ ကြည့်တော့သိပ်မသိရဘူး ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်တော့ ဘယ်က ဘယ်လိုစရမယ်ဆိုတာ အတော်ခက်တယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကလဲ တခါမှ မသုံးဖူးဘူး။
ထည့်စရာသီချင်းကလဲ မရှိတော့ ရှိတာလေးဘဲထည့်လိုက်တယ်။ နောက်ပြီး အစကတည်းက ဒီလိုလေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့လို့ ဒေါင့်စုံအောင်တော့ မရိုက်ခဲ့ရဘူး။ အမှန်က ဒိထက်ပိုစုံအောင်ရိုက်ခဲ့သင့်ပါတယ်။
လုပ်ပြီးဖိုင်ဆိုက်ကြီးနေလို့4ပုံ ၁ ပုံလောက် မနဲချလိုက်ရတယ်။ flv နဲ့ ပုံမှန်ချတာ 370 MB ကနေ 17 MB လောက်အထိကျသွားတယ် quality ပါ အရမ်းကျသွားတယ်။ အခုတော့ flv နဲ့ဘဲ 84MB လောက်အထိချထားပါတယ်။
လိုချင်တဲ့သူရှိရင်တော့ ပြောပါ upload ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
ရှိတာလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။ လိုအပ်ချက်များရှိရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ ။
အဲ့ဒီနေ့က မင်သားကတော့ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
(အဲ ... မနေ့ညက အတော်ညဉ့်နက်တဲ့အထိ ပြီးအောင်လုပ်လိုက်လို့ ဒီနေ့ဆေးခွင့်ယူလိုက်ရတယ် :sick: :sleep: )
(PS# Absence with request list ထဲမှာ ကျနော်ဘော်ဒါကြီး phyo ကို အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်ပြီး မထည့်လိုက်မိတဲ့အတွက်ဗဲရီးဆောရီးပါ phyo ရေ)
Full screen ကြည့်ရန် အောက်ကလင့်သို့ကြွပါ။
အလဲ့ VCD လိုလို မင်္ဂလာဆောင်အခွေလိုလိုပါလား..။
အနော်တို့စားတဲ့ ကြေးအိုးဆီချက်ရယ်..၊ ငါးခေါင်းဟင်းချိူရယ်..၊ အရွက်ကြော်ရယ်..၊ အစ်ကိုဖိုးတာတို့စားတာတွေရယ် မရိုက်လိုက်ရဘူးနော်..။
မစားလိုက်ရတဲ့ နွေဦးနဲ့စုနဲ့ လေးပွနဲ့ Veronica နဲ့ဖို့ မပြလိုက်ရဘူး..။ ချိတ်မကောင်းလိုက်တာ..။
Good တယ်ကိုချစ်သီး... ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ :yo:
ဆရာသမားက ဒီလိုချီးကျူးတော့လဲ အားတက်ရပါ၏
ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ဗွီဒီယို ကြည့် ခွင့် ရတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ။
Camera adds 10 lbs လို့ ဆိုပေမဲ့ ညီမအေးတယောက်ဓါတ်ပုံထဲမှာ ပိန်နေတယ်။
MEF မှာ Singapore က အဖွဲ့ အတောင့်ဆုံး ထင်တယ်။ ပုံလေးတွေလည်း ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ လူတွေ မြင်ဘူးသွားတာပေါ့။ [စကားမစပ် ကိုတင်စိုး ဆိုတာ revit သင်မဲ့ ဆရာကိုကိုလား။ ] အင်းလေး မှာ တခါ စားဖူးတယ်။ အစားအသောက်လေးတွေ မဆိုးပါဘူး။ ရှေ့လထဲ မြန်မာပြည်ပြန်ရင်း စင်္ကာပူ ခဏ၀င်ဖို့ စီစဉ်သေးတယ်။ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ တွေ့ရင်း MEF ကအဖွဲ့ တွေလည်း တွေ့အုံးမယ်လို့ စဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ် အစဉ်မပြေလို့ မ၀င်ဖြစ်တော့ဘူးဗျာ။ နောက်နှစ်ထဲတော့ ရောက်ဖြစ်မလား မသိဘူး။
ဆေးခွင့်ယူလိုက်တဲ့ ကိုချစ်သီးကိုတော့ အားကျသွားပြီ...။
ကျွန်တော့်တော့ တစ်ပါတ်လုံး နေမကောင်းလည်း ရုံးတက်နေရတုန်း။
anyhow, MEF က အစ်ကို အစ်မ မောင်နှမတွေမြင်ရတော့လည်း ကြည်နူးမိသား ။
ကို ထွန်းအောင်ကျော်ကြီး ဘာတွေ အားတက်သရော ပြောနေတာလဲမသိ ???
ကို ချစ်သီး ၊ ပွဲ စီစဉ်တဲ့ ဦးရီးထွန်းဆိုပြီး တော်တော်ငယ်သေးတဲ့ အစ်ကိုကြီးနဲ့ တခြားသူတွေ အားလုံး ပျော်ပျော်ပါးပါး တွေ့ဆုံကြတာမြင်ရတော့လည်း MEF ဟာ အမြဲ စိတ်ထဲထားရမယ့် သင်္ကေတတစ်ခုလို့ပဲ ပြောရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့...။
ဆေးခွင့်ယူလိုက်တဲ့ ကိုချစ်သီးကိုတော့ အားကျသွားပြီ...။
ကျွန်တော့်တော့ တစ်ပါတ်လုံး နေမကောင်းလည်း ရုံးတက်နေရတုန်း။
ဒီမှာက လုပ်ပေးနိုင်လေ ပိုခိုင်းလေဘဲမဟုတ်လား။ အားနာရင် ခါးပါသွားလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေက အမြဲစေတနာအပြည့်နဲ့လုပ်ပေးလေ့ရှိတာနဲ့တင် သူတို့ပေးထားတဲ့လစာတန်နေပါပြီ။
တရက်တလေ ဆေးခွင့်လေးမှ မပေးနိုင်ရင် ၊ ကိုယ်ဆေးခွင့်ယူလို့ ကိုယ့်ကို cover လုပ်ပေးနိုင်မယ့် တခြားဝန်ထမ်းမရှိတဲ့ အလုပ်မျိုးဆို မြန်မြန်သာပြောင်းဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
နေမကောင်းဖြစ်ချင်တာကလည်း အကျိုးအကြောင်း တိုက်ဆိုင်နေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်...။ (အလုပ်နဲ့တာ့ မသက်ဆိုင်ပါဖူးလေ...)
anyhow, thanks for all yr kindness. :)
ပေါတာလူးတို့လို ကမ်းမနီး၊ မြေဝေး ဘဝမှာနေရသူတွေအတွက်၊ စက်ာပူ မိသားစုကတော့၊ တကယ့်ကို အားကျစရာပါပဲ။ စက်ာပူကိုရောက်လည်း၊ ဝရုန်းသုန်းကား ခဏတဖြုတ်နဲ့မို့၊ အကိုကြီးကိုထွန်း ဆီကိုသာ၊ ဖုန်းဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲမှာ၊ လာနိုင်တဲ့ သူတွေကလည်း တွေ့ကြဆုံကြ၊ ဆွေးနွေးကျနဲ့ မလာနိုင်တဲ့ သူတွေကလည်း၊ တဦးနဲ့ တဦးလေးစားစွာ အသိပေးခွင့်တောင်းရင်း၊ ချစ်ခင်စည်းလုံးမှု ကို၊ ပြကြပါတယ်။
မြို့ပြ၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်၊ ရေကြောင်းအစရှိတဲ့ နယ်ပယ်တွေမှာ ပညာကိုအသုံးချ၊ အသက်မွေးသူတွေဖြစ်ကြသလို၊ ပညာရပ်တွေကို ဖြန့်ဝေပေးနေသူမို့ လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ် အကို၊ အမတို့ရေ။
ပေါတာလူးဘေး အခန်းက ဖစ်တာအကိုကြီးဖွင့်တဲ့ 'အသီးတရာ၊ အညှာတခု' သီချင်းကိုတောင်၊ သတိရမိပါတယ်။ အကို၊ အမတို့က အသီးတရာဆိုရင်၊ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ကြီးရဲ့ အညှာတခုပေါါမှာ၊ ဖူးပွင့်ကာ၊ သီးလာတဲ့ အသီးတွေလို့ ပေါတာလူး ခံစားမိပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပေးတဲ့ အကိုကိုစည်သူအောင် နဲ့ အက်ဒမင်အကို ကိုချစ်သီးတို့ကိုလည်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စုစုဝေးဝေးသိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်း နေတတ်တဲ့ အကိုကြီးကိုထွန်းနဲ့ စီစဉ်ပေးတဲ့ ဆရာအကိုကြီးဒိ ကိုလည်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကို ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကတော့ အလေးအနက်ဆွေးနွေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ စာတွေသင်ပေးတဲ့အခါ၊ ရီစရာတွေပြောသင်တတ်သလို၊ တွေ့ဆုံပွဲမှာလည်း၊ အကိုကြီး ကိုထွန်း ရီစရာတွေပြောနေမယ်ဆိုတာ၊ ပေါတာလူး တွေးမိပါတယ်။
တွေ့ဆုံပွဲတွေ မကြာမကြာလုပ်ကာ ဆွေးနွေးကြရင်း၊ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ဟာ မြန်မာပညာရေးလောကအတွက်၊ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ၊ ဆက်လက်ကူညီပေးသွားနိုင်ပါစေလို့၊ ပေါတာလူး ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ဒူဒူ ပြန်လာပါပြီ။ Qantas လေကြောင်းပိတ်သွားလို့ တွေ့ဆုံပွဲကို၊ မတက်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ Qantas လေကြောင်း သပိတ်မှောက်တဲ့ ကိစ္စဟာ၊ ဒူဒူ နဲ့ ဘာမှမပါတ်သက်ပါဘူး။ ဒူဒူ အကြောင်းကြားဖို့ ကြိုးစားပါသေးတယ်။ ခွင့်တိုင်ကြားခြင်းခေါင်းစဉ် (http://www.myanmarengineer.org/forums/showthread.php?7897-%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8) ကို အဲဒီနေ့က၊ ဝင်လို့မရလို့ပါ။ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရတဲ့ အခါ၊ မလာနိုင်တဲ့ ဒူဒူ့ ဘဝကို၊ စိတ်နာပါတယ်။
ဆရာအကိုတွေ ရိုက်ပေးတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရတဲ့အခါ၊ ဦးရီးတယောက်ကလွဲလို့ အကို၊ အမတွေဟာ ခန့်ချောကြီးတွေမှန်း၊ သိရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံပေးတဲ့ ဆရာအကိုတွေကို၊ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲတွေ မကြာမကြာလုပ်ကြရင်း၊ MEF နဲ့ အတူဆက်လက်ချီတက်နိုင်ကြပါစေလို့၊ ဒူဒူ ဆုတောင်းပေး ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ (၂၅) ရက်နေ့ ညနေ (၆) နာရီမှာ၊ Boon Lay MRT station ကိုအားလုံးအရောက်လာဖို့၊ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ မဂ်လာဧည့်ခံပွဲ့ Tea section က (၆) နာရီ (၃၀) မိနစ်မှာစတင်မှာပါ။ မဂ်လာ သတို့သမီးနဲ့ သတို့သမီးကို၊ ဂုဏ်ပြုဖို့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မိသားစုဝင်များ ကိုဖြိုး ရဲ့ မဂ်လာပွဲကိုတက်ရောက်ကြသလို ဆုံညီစွာချီတက်ကြပါ။ မဂ်လာမဆောင်ရသေးသူများ မြန်မြန်ဆောင်ဖြစ်စေဖို့၊ ကျွန်တော့်လို ဆောင်ဖူးသူများ၊ ထပ်ဆောင်ချင်စေဖို့ အစီအစဉ်များလည်း၊ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ဧည့်ခံပွဲအချိန်ပြောင်းတယ်လို့ KPZ ကပြောတယ်ဗျ။ ၆ နာရီ ခွဲအစား ၇ နာရီ ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုပဲ။
အဲဒီတော့ ကျနော့်တို့ စုရပ်ကို ၆:၃၀ (ခြောက်နာရီခွဲ) ရောက်ရင် ရပြီဗျ။
Boon Lay MRT ကို ၆:၃၀ အရောက် လာခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ရဲ့ ဘဏ္တွာရေးမှူးတဦးဖြစ်သူ ညီမ KPZ နဲ့ ကိုအောင်ကျော်မြင့်တို့ရဲ့ မဂ်လာဧည့်ပွဲဟာ၊ စက်ာပူရောက် မြန်မာအင်ဂျင်နီ ယာဖိုရမ် အဖွဲ့ဝင်များရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲပမာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်တာဝန်အရ အဝေးရောက်နေသူတွေမှလွဲလို့ မဂ်လာဧည့်ခံပွဲသတင်းကို၊ သိထားသူ များ အရောက်လာခဲ့ကြသလို၊ နှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့ မဂ်လာမောင်နှံမှ၊ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် အတွက် (၁၀) ယောက်ဝိုင်း (၃) ဝိုင်း စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ရဲ့ အထူးအသင်းဝင်တဦးဖြစ်သူ ကိုငယ် မှ၊ ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးတာဝန်ကို၊ မေတ္တာနဲ့ အစအဆုံးကူညီပေးပြီး၊ ရိုက်ပြီးသားပုံတွေကို၊ ချက်ခြင်းတည်းဖြတ်ကာ၊ မဂ်လာဧည့်ခံပွဲတလျှောက်လုံး၊ တင်ပေးနေသလို၊ စက်ာပူရောက်မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် အဖွဲ့ဝင်များရဲ့ အုပ်စုပုံ တွေကိုလည်း၊ အမိအရ ရိုက်ကူးပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ မဂ်လာမောင်နှံကျက်သရေရှိစွာလျှောက်လှမ်းလာစဉ် မှာတော့၊ မဂ်လာဧည့်ခံပွဲတက်ရောက်လာသူ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ဧည့်ခံပွဲကျင်းပရာ Restaurant မှ၊ နိုင်ငံခြားသားများ သဘောကျနှစ်ခြိုက်စွာ၊ လက်ခုတ်သြဘာပေးကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် အကြောင်း အမှတ်တရပြောနေတဲ့ ညီမ မခိုင်
MEF ရဲ့ မဂ်လာဆုတောင်းကို စာနဲ့ ရေးခဲ့အပြင်၊ သေခြာအောင် ထပ်ပြောပြနေတဲ့ ကိုထွန်း၊ ကိုပစ်ကလေးနဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်
မဂ်လာမောင်နှံရဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားမှာ၊ အရင်ဆုံးခေါင်းစဉ်တတ်ကာပြောကြားခံရတဲ့၊ အဖွဲ့ကတော့ MEF ဆိုတဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ MEF ဟာ ညီမ မ KPZ ရဲ့ ရင်ထဲမှာ အမြဲရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သက်သေပြလိုက်ခြင်းပါပဲ။ MEF ရဲ့ မဂ်လာဆုတောင်း ကိုတော့၊ ဒီနေရာမှာ မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ ဘယ်လိုဆုတောင်းစာမျိုးရေးခဲ့တာကိုသိချင်ရင်တော့၊ မဂ်လာမောင်နှံကို ဆက်သွယ်ပြီးမေးနိုင် ပါတယ်။
ကိုဂျာမိုးကိုကို၊ ကိုစိုနိုင်၊ ကိုလိပ်ကြီး၊ ကိုငယ်၊ ကိုဒိဘလူး၊ ကိုထွန်း၊ ကိုဇီးရော့ဖ်၊ ကိုဖြိုးမောင်၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုပစ်ကလေးနဲ့ ကိုချင်းတွင်းသား
ကိုဖြိုးမောင်၊ ညီမဂျွန်မိုးအိမ်၊ ကိုလိပ်ကြီး၊ ကို MMO၊ ကိုဂျာမိုးကိုကို၊ ကိုချင်းတွင်းသား၊ ကိုသန့်စင်ဦး၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုစိုးနိုင်၊ (ထိုင်လျှက်) ကိုစိုးနိုင်ရဲ့ မူပိုင်ရှင်၊ ကိုပစ်ကလေး၊ အေး၊ (လက်ပဲပါတာက) ကိုထွန်းနဲ့ ဆရာအကို ကိုဒိဘလူး
ကိုဂျာမိုးကိုကို၊ ကိုစိုနိုင်၊ ကိုလိပ်ကြီး၊ ကိုဒိဘလူး၊ ကိုငယ်၊ ကိုထွန်း၊ ကိုဇီးရော့ဖ်၊ ကိုဖြိုးမောင်၊ (လက်နှစ်ဖက်မြှောက်ထားသူက) ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုချင်းတွင်းသား နဲ့ ကိုဖြိုး
ကိုထွန်းရဲ့ မူပိုင်ရှင်၊ ကိုလိပ်ကြီး၊ ကိုပစ်ကလေး၊ ကိုထွန်းရဲ့ ကျေးဇူးရှင်၊ အေး၊ ကိုထွန်း၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်နဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ မူပိုင်ရှင်
စားပွဲအောက်ဝင်ကာ ဂိမ်းကစားနေတဲ့ ကိုထွန်းရဲ့ ကျေးဇူးရှင်
ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုဖြိုးနဲ့ ကျွန်တော့်လို မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသူများမှ၊ မူပိုင်ရှင်များနဲ့ အတူတက်ရောက်ခဲ့သလို၊ မကြာခင်မှတ်ပုံတင်တော့မည့် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ရဲ့ အသင်းဝင်များမှလည်း၊ မူပိုင်ရှင်များနဲ့ အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တချို့ကလည်း မူပိုင်ရှင်ရှိသွားပြီဆိုတာ သက်သေပြဖို့၊ အပြေးအလွှားတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုထွန်းအောင်ကျော် ကတော့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးပီပီ၊ တဝိုင်းဝင်၊ တဝိုင်းထွက်၊ တခုပြီးတခုံပြောင်းကာ post တွေရေး တင်ဖို့၊ စည်းရုံးနေသလို၊ ကျွန်တော်ကတော့ မဂ်လာမောင်နှံဧည့်ခံတဲ့ ဘီယာ၊ ဝိုင်နဲ့ ဂျော်နီဝါကား ဒဘယ်လ်ဘလက်ဝီစကီတွေကို၊ သောက်လုံး ကြီးသူပီပီ၊ ကျန်ခဲ့မှာ နှမျောလို့ တဂွတ်ဂွတ်နဲ့ ဖြိုခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ အေးတို့က ဖွကြသလို၊ ၊ ကိုပစ်ကလေးရဲ့ ဂျပန်စကားပြောစွမ်းရည်ကို၊ စစ်ဆေးခဲ့ကြပြီး၊ အမှတ်ပေးတဲ့အတွက်၊ ကိုပစ်ကလေး ဟာ၊ နောင်မှာ ကျွန်တော့်ကို ဒီ့ထက်ပိုပြီး ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုပစ်ကလေးဖုန်းဆက်ရင်၊ ပြန်မထူးတော့ဘူး စဉ်းစားထားပါတယ်။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်နဲ့ ကိုဖြိုးတို့ facebook မှာတင်ပေးတဲ့ ပုံတွေကို၊ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အကိုကိုအောင်ကျော်မြင့် နှင့် အမ KPZ တို့ မင်္ဂလာ နေ့ဦးနေ့မြတ်မှသည် ၊ သက်ထက်ဆုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ယှဉ်တွဲပေါင်းဖော်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းလိုက်ပါသည် ။ ( အားကျခြင်းများစွာဖြင့် )
တချို့ကလည်း မူပိုင်ရှင်ရှိသွားပြီဆိုတာ သက်သေပြဖို့၊ အပြေးအလွှားတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကလဲတစ်မျိုးအားကျစရာပါပဲ Forum ထဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးအောင်လဲ MEF ကိုအရောက်ခေါ်ခဲ့ပါအုန်းလိုတခါထဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ......
ကျွန်တော်ကတော့ မဂ်လာမောင်နှံဧည့်ခံတဲ့ ဘီယာ၊ ဝိုင်နဲ့ ဂျော်နီဝါကား ဒဘယ်လ်ဘလက်ဝီစကီတွေကို၊ သောက်လုံး ကြီးသူ ပီပီ၊ ကျန်ခဲ့မှာ နှမျောလို့ တဂွတ်ဂွတ်နဲ့ ဖြိုခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်နှင့် ကိုလိပ်ကြီးတို့ကလဲ ဦးလေးကိုအားကျမခံ အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါမှလဲ ကျွန်တော့ဦးလေးက နောင်ကိုအတူသောက်ဖို့ခေါ်နိုင်မယ်မဟုတ်လား။ တကယ့်ကို ဝမ်းသာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးပါပဲ။
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ အေးတို့က ဖွကြသလို၊ ၊ ကိုပစ်ကလေးရဲ့ ဂျပန်စကားပြောစွမ်းရည်ကို၊ စစ်ဆေးခဲ့ကြပြီး၊ အမှတ်ပေးတဲ့အတွက်၊ ကိုပစ်ကလေး ဟာ၊ နောင်မှာ ကျွန်တော့်ကို ဒီ့ထက်ပိုပြီး ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုပစ်ကလေးဖုန်းဆက်ရင်၊ ပြန်မထူးတော့ဘူး စဉ်းစားထားပါတယ်။
အခြေအနေကြည့်ရတာတော့ ဦးရီးထွန်းမဒီကိုပါ ကပ်ထားရမလိုပဲ
ဒါမှလဲ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ အမ KPZ လိုမင်္ဂလာပွဲကြီး ချိမ့်ချိမ့်သဲ ကျင်းပနိုင်မယ်မဟုတ်လား ......
ပို့စ်အကုန်လုံးမှာ ဦးရီးထွန်းလို့ရေးပြီးမှ သတိရလို့မပြင်တော့ပါဘူး ...... ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ကစလို့ အကိုကြီးထွန်းလို့ပြောင်းခေါ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ် ( အကိုထွန်းမဒီအကြံပေးချက်အရ ) ;)
ဖွကြပါ။ အေရာ ကဖွလိုက်၊ ဒူဒူ ကဖွလိုက်၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ကဖွလိုက်နဲ့ အခုတခါ၊ ကိုယ့် မဒီကညာ ကပါ၊ ဖွပြန်ပြီ။ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ဇနီး ကလည်း မေးသွားသေးတယ်။ ကိုထူးကြီးနဲ့ သိလားတဲ့။ အဲဒီ ကိုထူးကြီးဆိုတဲ့ တယောက်ပေါ့၊ ကိုထွန်း သဘေ်ာပေါါမှာ ရေမသောက်ဖူးလို့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ဆီ၊ တကူးတကန့်သွားဖွသေးတယ်။
ဟိုတလော ကလည်း၊ ဆံပင်ဖြူနေလို တလတခါ၊ ဆေးဆိုးရ ကြောင်း ထွေထွေနဲ့ ပြောမိပါတယ်။ 'ကိုယ့်ဟာကိုယ် ငယ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသော၊ အများက ဦးရီးဟုခေါ်သော' ဆိုပြီး ကြေငြာခံ ရတယ်။ ဟိုနေ့ကလည်း ပျင်းတာနဲ့ ပင်နယ်ဆူလာပလာဇာမှာ တယောက်တည်း ဘီဘီသွားသောက်ပါတယ်။ ဟို အင်ဂျင်နီယာမလေးက၊ SMS ပို့ပြီး၊ MEF တွေ့ဆုံပွဲလာလုပ်တာလားတဲ့။ မေးပုံကိုက... .တော်သေးတယ် ဦးရီးထွန်း တယောက်တည်း၊ လမ်းသလားပြီး၊ သာယာနေတယ်ဆိုပြီး မဖွလို့။
ဒီကြားထဲ မဂ်လာဧည့်ပွဲအပြီး၊ မဂ်လာမောင်နှံကိုသွားနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ KPZ က၊ ကိုထွန်း.. ပစ်ကလေးကို ဘာတွေ၊ ပေါက်ကရပြောထား လည်း... ဆိုပြီး၊ ကြိမ်းသေးတယ်။ ပစ်ကလေးကို တိုးတိုးလေးပြောမိပါတယ်..ဖွပြန်ရော။ တခါ ဆရာမို့လို့ အားကိုးရမလားထင်ပါတယ်။ ပဲနီလေး ပိုးထိုးတာတွေကို ဝယ်တာရော၊ ငါးကြင်းဗိုက်သားနဲ့ ဂုတ်သားခဏခဏပြန်လဲတာရော၊ ဆိုင်က ခဏခဏလာပြန်လဲနေရင် လူပါလိုက်ခဲ့ရမလား.. လို့မေးတာ မူးမူးနဲ့ လိုက်ခဲ့လို့ပြန်ပြောတာအကုန်.. အကိုဒိက ဖွပြန်ရော။ နွေဦး ပြောနေကြ စကားယူသုံးရရင် 'အမလေး ဘုရား၊ ဘုရား' ဆိုပြီး ဘုရား တနေရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ ကိုထွန်းတစ်ယောက်ကတော့ ဖွတိုင်းမပွလာဘူးနော်။ ဘာလို့လည်းမသိဘူး။ ဒါလောက်ဖွတာတောင်။
ချစ်လို့စကြတာပါ ကိုထွန်းရယ်( ဦးရီးထွန်းလို့မခေါ်တော့ပါဘူးဗျာ.....လူကြီးစိတ်ကောက်ရင်ပိုဆိုးမှာစိုးလို့)
ဖွလို့ရပါတယ်ဗျာ။ စိတ်ကောက်စရာမှမဟုတ်တာ။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကသာ မပွဘူးပြောနေတာ၊ Jurong East ကားမှတ်တိုင်မှာ၊ ချိန်းပြီး ဆုံနေကြ ဟိုး သိမ်ဖြူသဘေ်ာကျင်း ကတည်းက၊ ငယ်သူငယ်ချင်းကတော့ မင်းပွလာပြီ၊ ကြည့်လုပ်ဦးပြောနေလို့....။ ဒါနဲ့ စကားမစပ်၊ ပစ်ကလေးကို၊ ပြောတဲ့ပုံပြင်က ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို အရင်ဆုံးပြောတဲ့ ပုံပြင်ပေါ့။ အဲဒါကို ပစ်ကလေး လျှောက်ဖွတယ်လေ။
ပစ်ကလေးကို ဘာတွေ၊ ပြောထားလည်း... ဆိုပြီး၊ ကြိမ်းထားတာမို့ ညက KPZ ဖုန်းဆက်တော့၊ လန့်နေတာ။ မလေးရှားကို ဟန်းနီးမွန်း ထွက်မယ်ဆိုတာ၊ အကြောင်းကြားတာပါ ဆိုမှ၊ တော်ပါသေးရဲ့ ဆိုပြီး၊ သက်ပျင်းချရပါတယ်။ ကိုထွန်း ကို၊ ယုံကြည်တယ် ထင်ပါရဲ့။ ခရီးထွက်နေတုန်း ဆိုင်လေး ဘာလေး တောင်စောင့် ခိုင်း မသွားဘူး။ ကိုထွန်းကလည်း ကိုထွန်းပါပဲ။ MEF တံဆိတ်နဲ့ ပိုလိုရှပ်အဖြူ (၂) ထည်ဖိုး၊ ခုထိ မပေးရသေးပါဘူး။
ကြုံတုန်းပုံပြင်လေးတပုဒ်ပြောပါရစေဦး၊ ဖွတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့။ ကြာတော့ကြာပါပြီ။ ကိုဖြိုးက phone ဆက်ပြီး၊ သတင်းအတိ အကျပေး တာနဲ့ ချက်ခြင်း phone ဆက်ကာ၊ ဘယ်မှာလည်း ဘာညာလှမ်းမေးလိုက်ရော။ ကားမှတ်တိုင်မှာတဲ့။ ဘယ်ရမလည်း သတင်းက အခုတင်၊ အတိအကျရထားတာမို့၊ Jurong West Steet ဘယ်လောက်က၊ Block နံပါတ် ဘယ်လောက်ရဲ့၊ ဓါတ်လှေကားနံပါတ် ဘယ်လောက် ထဲကို၊ ဘယ်သူနဲ့ အတူဝင်သွားတယ် မဟုတ်လားဆိုတော့မှ၊ အကိုက ဘယ်လိုသိတာလည်းတဲ့။
လှိမ့်လက်စနဲ့ ဆက်လှိမ့် ရတာပေါ့။ GPS မှာ ပေါါနေတယ် ဆိုတော့၊ မယုံဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ နှစ်ယောက်လုံးဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားအရောင်ကို အတိအကျပြောပြီး၊ နောက် တချပ်ထုတ်ရှိုး လိုက်တယ်။ အဲဒီကျမှ သူငယ်ချင်း ပါတဲ့။ စက်ာပူက GPS တွေကလည်း၊ အကုန်မိတာနော်။ phone နံပါတ်သိရင် ရှာလို့ရတယ်၊ ဘာညာဆက်ပြော ထားတာ ယုံနေတယ်။ ကိုဦးနဲ့ chat room လား၊ g talk မှာဆုံတော့၊ GPS နဲ့ ကြည့်လို့ ရလားလို့၊ မေးသတဲ့။ ကိုဦး က ဘာကြပ်လွှတ်လိုက် လည်း၊ မသိဘူး။ အယုံကြီးကို၊ ယုံသွားပါလေရော။
ပုံပြင်လေးကို၊ အဆုံးသတ်ရရင်တော့ အဲဒီ သူငယ်ချင်းပါဆိုတဲ့ တယောက်ကတော့၊ မဂ်လာဧည့်ခံပွဲကို အတူတက်ခဲ့တဲ့ တယောက်ပါပဲ ခင်ဗျား။
ဖွတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့။ ကြာတော့ကြာပါပြီ။ ကိုဖြိုးက phone ဆက်ပြီး၊ သတင်းအတိ အကျပေး တာနဲ့ ချက်ခြင်း phone ဆက်ကာ၊ ဘယ်မှာလည်း ဘာညာလှမ်းမေးလိုက်ရော။ ကားမှတ်တိုင်မှာတဲ့။ ဘယ်ရမလည်း သတင်းက အခုတင်၊ အတိအကျရထားတာမို့၊ Jurong West Steet ဘယ်လောက်က၊ Block နံပါတ် ဘယ်လောက်ရဲ့၊ ဓါတ်လှေကားနံပါတ် ဘယ်လောက် ထဲကို၊ ဘယ်သူနဲ့ အတူဝင်သွားတယ် မဟုတ်လားဆိုတော့မှ၊ အကိုက ဘယ်လိုသိတာလည်းတဲ့။
ဒါနဲ့ အဲဒီတစ်ယောက်တော့ ဘယ်တော့လဲဟင်... :director: :director::director:
Congratulation ပါ မခိုင်ရေ..
အွန်လိုင်းမတက်ဖြစ်တော့ မသိလိုက်ဘူး။
အမြဲတမ်း ပျော်ရွင်စွာ တူနှစ်ကိုယ် လျှောက်လှမ်း နိုင်ကြပါစေနော်...
MEF အဖွဲသားတွေ နဲ့ အတူ တွေ့ရတော့ အရမ်းပျော်စရာကောင်းမှာပဲနော်..
ကဲချက်ကတော့ ကမ်းကုန် ပဲ ပစ်ကလေး (အေးသာယာ) ကတော့...
အကိုပစ်ရယ် အကိုပစ်တို့ကျမှ ဂလိုဖြစ်လာတာပါနော် (ဂျပန်စကားအပေါ် အမှတ်အတော်ပေးလို့" ကော်" သွားတာလား ......
တခြား တခြား တော်တာတွေများနေလို့လား တခုခုပဲနေမှာဆိုတာ ပြေးမကြည့်ရပဲ တွေးမိပါတယ်)
အေ၇ာမှာဖြင့် ကိုကြီး ကိုကြီးနဲ့ ခေါ်လိုက်ရတာ ကြာပြီကော၊ ဒါပေမယ့်လဲ မောတာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်၊ ဆီမလာ ပျားမလာနဲ့ ..... ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲ။
ပြီးတော့လေ ..... ကိုကြီးက .... သိလား၊
"ပု" တာခြင်း အတူတူ "စု" ကိုကျ...... "တူမ" တဲ့
သေးလှီပြီး လှတာခြင်း အတူတူ "အေး" အမည် ကျ ..... ခေါ်ပြီပ၊ " အေးညီမ" တဲ့ .......
ခင်တာခြင်း အတူတူကို တချို့ကိုကျ ..... အစဉ်အလာမသေးကြောင်း ထွင်ကာပေးထားတယ်၊ "အင်/ယာ မလေး ..... " ဆိုတာမျိုးလေ ....
ကိုကြီးနဲ့ ပိုပြီးခင်တာ မှန်ပေမယ့် တစ်ကယ်ကတော့ အမမူနဲ့လည်း အစဉ်အကြောင်းသင့်ဖို့ ခင်အောင်ပေါင်းလို့ နေချင်တာပါနော်၊
ဒါပေမယ့် အေ၇ာမှာ အနေဝေးလို့ အခြေအနေမပေးပဲ ကြာနေတာပါ .....
အပြင်မှာ လူ မမြင်ဖူးပေမယ့်
ယဉ် တမူလှတဲ့ စင်ကာပူက တို့အမ အမမူရယ်လို့
စိတ်ထဲမှာ ရင်းနှီးစွာသတ်မှတ်ကာ ခင်နေတာတော့ အတော်ကြာပါပြီ ......
(အပြုံးများနဲ့ ကျုံးဝါးနေတဲ့ "အစ်ကိုပစ်" ကို ကျောနိုင်ဖို့က ဒီနည်းပဲရှိတော့တယ်)
(အစ်မအေးဆိုလဲ ခဏလေး အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတာနဲ့ အေ၇ာကို လိုက်မမီအောင် ဖြတ်ထားခဲ့တယ်၊)
ဒီလိုသာ လွယ်လွယ်နဲ့ အလျှော့ပေးရမယ်ဆိုလျှင် သမင် ၁၀ လှမ်း၊ ကျား ၁ လှမ်း စကားပုံ ဘယ်သွာထားမလဲနော်၊ ကျန်နေသူတွေကလဲ လက်ဖက်ကောင်းစားချင်လျှင် ပလောင်တောင်တက်နှေးရမယ်ဆိုတဲ့ စတိုင်နဲ့ အားတော့ မလျော့ကြပါဘူး။
အလဲ့ .......... သူများတွေ မင်္ဂလာဆောင်ကုန်ကြပါပေါ့လား ....
မင်္ဂလာ သတို့သား သတို့သမီး အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျား ...
(မှတ်ချက် ... မကေပီဇက်နဲ့ အတူကျောင်းတက်ဖူးသော စကီခေါ် ရေဘ၀ဲခေါ် ဘီလူးမ ကတော့ ဒေ၀ူးသင်တန်းတွင် ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ အဖွဲ့ကျနေပါ၏ ........)
ဦးရီးထွန်းလည်း အတော်လန်းသေးတာပဲနော် ......... ၀မ်းစမိုး ၀မ်းစမိုး (မှတ်ချက် ... နောက်တစ်ယောက် ထပ်ယူရန်တွန်းအားပေးချင်း မဟုတ် ... အဲ ရသွားတော့လည်း ကိုယ်ဘာများ တတ်နိုင်ဦးမှာတဲ့လဲ ... ဟီ ဟိ)
ပစ်ကလေးလည်း တော်တော်လန်းတယ် ............ အိမ်း ဂျီတော့မှာဆိုရင်တော့ ရည်းစားတောင်မထားမိပါဘူးဗျာလို့ ပြောလားပြောရဲ့ ... ခုတိုင်းဆိုရင်တော့ မယုံရတော့ဘူး ထင်ပါ့ ................. (မထင်ရက်စရာလေးပါ)
ဟုတ်ကဲ့ ... ၀မ်းနည်းပါသည် ...
မျှော်သာမျှော် ပေါ်မလာသူရယ် ဘိန်းစား............။
ပျော်စရာကြီးပါလား...ကိုဂါးရော၊ ကိုကိုပွရော၊ မမနွေဦးရော၊ မမအေးပါ ပြန်ပေါါလာကြပြီ။ တစုံတဦးကများ ကြိမ်စကြ်ာနဲ့ရိုက်ခေါါလေလားမသိ။ အရင်တုန်းကလို ဟီးဟီးဟားဟား...ထွေလီကာလီတွေဖောကြမယ်လေ....
(ဖိုရမ်မှာ) update မဖြစ်တဲ့သူတွေတော့
သတိ .. သာ ...... ထား....နေကြ
တာရာဟာ ဗရော်နီကာမပါပေမယ့်၊ ဆော်ဒီမှာ သာယာခဲ့ပုံရပါတယ်။ အေရာခမျာ အပ်ပဒိတ်ဖြစ်သူနေသူတွေကြားမှာ၊ ယောင်ခြာခြာကျန်ခဲ့မှာကိုလည်း၊ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
အပ်ပ်ဒိတ် သတင်းရထားတာကိုပြောရရင်... တချို့ကတော့ တလိမ့်လိမ့်နဲ့ ချော်လဲတတ် ပါသတဲ့။ တချို့ကတော့ မဒီကညာကို အဖော်လုပ်ကာ၊ လှမ်းရသလို၊ အဖော်မရှိသူ ခမြာများကတော့ တွင်းတူးစင်ပေါါ တက်လိုတက်၊ ဘုတ်တစီးစီးကာ ပင်လယ်ရေအနက်ကို၊ တိုင်းလိုတိုင်းကာ အဖော်ရှာကြပါသတဲ့။ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းပေးသူဟာ တိကျသေခြာသလို၊ ဟိုဆရာ ရန်ကုန်ပြန်တုန်း၊ ဖွလိုက်ရပါတော့တယ်။
ဟိုဆရာ ရန်ကုန်မှပြန်လာမှ၊ ဟိုင်းလပ်ကားမစီးတော့ပဲ၊ MPV ဆိုတဲ့ multi purpose vehicle ကားဝယ်စီးဖို့ကြံနေသူ၊ မဒီကညာကို အဖော်လုပ်ကာ လှမ်းရသူ၊ တလိမ့်လိမ့်နဲ့ ချော်လဲတတ်သူ၊ တွင်းတူးစင်ပေါါတက်သူနဲ့ ဘုတ်တစီးစီးကာ ပင်လယ်ရေအနက်ကို၊ တိုင်းနေသူတွေပါခေါါပြီး၊ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းပေးနဲ့အတူ၊ ဆုံဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။
ထင်ပေါ်လို့ စင်တော်က ကောက်သွားတာ (ဒေ၀ူး ရဲ့ စင်မြင့်မှာ ဆိုပါတော့ မမအေးရယ်)
ဒေ၀ူးက ပြန်အလာ ဒေါ်လာတွေပါတာတောင်
အထွေအထူး အခြေအနေတွေ မထူးသေးပါ ဆိုလျှင်တော့
ရေဗူးသာ အဖေါ်လုပ်ပေရော့ (အဲ .... ရေဗူးဆောင်ပြီး ရှာပေဦးတော့ လို့ပြောတာ)
အင်း ... ရေဗူးကောင်းပေမယ့် ရေမသန့်တော့လည်း ခက်သားကွယ့် ...
တော်နေကြာ ၀မ်းလျှောနေ မခက်ပါကလား ....
အေရာရေ အမည်သညာခေါါဖို့ facebook ထဲက "ဒီနေရာမှာ" (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=348633815163896&set=a.348633791830565.96472.100000518425455&type=1&theater&notif_t=photo_reply) ပြောကုန်ကျပြီ။
ဆရာချစ်တယောက် ရွှေပြည်ကြီးသို့ အပြီးပြန်တဲ့အခါ၊ ကျွန်းကလေးသူ၊ ကျွန်းကလေးသား ဖိုရမ်မာများမှ၊ နှုတ်ဆက်ပွဲလေးတခုလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဒီ့အတွက်လည်း ညီမမ KPZ ကို၊ စီစဉ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဆရာချစ် နှုတ်ဆက်ပွဲမှာ၊ စက်ာပူဖိုရမ်မာတွေလည်း၊ တစုတဝေးတည်းဆုံကြဖို့ ဖိတ်ခေါါပါရစေခင်ဗျား။
အလုပ်ထွက်ပြီမို့ အရင်သုံးနေကျဖုန်းနံပါတ် +(65) 9177 9033 ကိုလည်း၊ ရုံးမှာပြန်အပ်ခဲ့ပါပြီ။ လက်ရှိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ နံပါတ်တွေကတော့ (အိမ်) + (65) 6409 1316 နဲ့ (မမူမူ) + (65) 8291 4515 တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံး email ကိုလည်း၊ မသုံးတော့ပြီမို့ tunthu@paradigmships.com.sg အစား၊ tunthu.kotoe@gmail.com မှတဆင့်၊ စာပို့နိုင်ပါတယ်။
စီစဉ်တာက အားလုံး ပီးပီ။ လူစုံတက်စုံ လာဖို့ပဲလိုပါ၏။ ကိုထွန်းကပဲစပီး အလှူငွေ ၁၀၀လောက် စလွှဲပေးလိုက် နော်။ လစာတွေ အများကြီးတိုးတဲ့ အလုပ်သစ် ရထားတာပဲ ဟီးဟီး. မက်စိတ်လေးတွေ ပို့ပေးပါနော် 9727 6123 ကို
ညနေဆိုင်မှာ ဝင်ပေးထားလိုက်မယ်၊ စိတ်သာချ။
ပစ်ကလေးကလဲ လူပျိုကြီးဆိုတော့ အသုံးစရိတ်တွေ ပိုနေမှာပေါ့နော် :P
သူဝင်ပေးမှာပေါ့...west coast က၊ သူ့နယ်မြေလေ..ဟီဟိ။
Dear Ko Tun, KPZ and all Sg MEF family members,
I will go back home happily on coming Friday.
I have terminated my iphone line last week and can't access online all the time already.
I really appreciated to all of your arrangement for me.
Conversely, I think I can't join to this farewell bcoz I have to settlealot of things.
Anyway, thank you very much to all and see you in future.
ကျွန်တော် ကာတာသွားရမယ့် ကိစ္စပေါ်လာလို့ ဒီညပဲထွက်ရတော့မယ်.. စနေနေ့ကို ချိန်းထားပြီးမှ မလာနိုင်တော့ပြန်ဘူး.. ပြန်လာမှပဲ သေသေချာချာကိုလာတွေ့ပါအုံးမယ် ခင်ဗျား..
လာမယ့်စနေမှာ ဖိုရမ်အမာခံထဲကတစ်ယောက် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲလုပ်မယ်လို့ ဖိတ်ကြားလာပါတယ်..။ သူဖိတ်ကြားပုံက သင်းတယ်ဗျ..။ လာနိုင်မလားဆိုတာ အရင်မေးတယ်..။ လာနိုင်မယ်ဆို သူ့မေးလ်ကိုအကြောင်းကြားပါလို့ ပြောတယ်..။ လာနိုင်မယ်ဆိုမှ ဖိတ်စာပို့မယ်လို့ ပြောပါတယ်..။ သူဧည့်ခံမယ့်နေရာက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လူဦးရေကန့်သတ်လို့လား မသိပါဘူး..။ လာမယ့်သူနဲ့ ဧည့်ခံမယ့်ပွဲစားရင်းကို ချိန်ကိုက်ချင်လို့လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်သိထားတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်နည်းတွေနဲ့ မတူလို့ နိုင်ငံကွာသွားလို့ ပုံစံကွာသွားတာလားလို့လည်း စဉ်းစားမိပါတယ်..။ ကျွန်တော်သိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်နည်းက ခင်တဲ့သူတွေ လာစေချင်သူတွေကို ဖိတ်စာတွေဝေရပါတယ်..။ လာနိုင်မလာနိုင်တာက သူ့အပိုင်းပါ..။ လာလာမလာလာ ဧည့်ခံမယ့်ဖို့ကြိုပြင်ထားပါတယ်..။ ဖိတ်ထားတဲ့ဖိတ်စာအစောင်အရေအတိုင်း လူဦးရေကိုတွက်ပါတယ်..။ ဒါကတော့ တောမှာဆောင်တဲ့နည်းနဲ့ စလုံးမှာဆောင်တဲ့နည်း ကွာသွားလို့ဖြစ်မှာပါ..။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းအရင်းတစ်ယောက်ဆောင်တုံးကတော့ သူလည်းအဲလိုပဲ ဖိတ်စာအတိုင်းဧည့်ခံမယ့်ပွဲအရေကိုစီစဉ်ထားပါတယ်..။ ပိုလျှံတော့ ကျောင်းကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေပါ ဧည့်ခံလိုက်ပါတယ်..။
အခုမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်တဲ့သူက မင်္ဂလာမဆောင်ဘူးလို့ ဘယ်လိုဖိတ်ရမှန်းမသိလို့လည်း နေပါလိမ့်မယ်..(ကိုယ်ကတော့ စိတ်ကူးထဲမင်္ဂလာဆောင်တာ အခါခါရှိပြီလေ..)။
ဒါမှမဟုတ် ဘာရယ်မဟုတ် ပြောတတ်သလိုပြောတာနေပါလိမ့်မယ်..။ သူနဲ့ရင်းနှီးတာက သွားကိုသွားရမယ့် ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ..။ ဒါပေမယ့် လာနိုင်ရင်ဖိတ်စာပို့လိုက်မယ်ဆိုတော့ မသွားတော့ဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်....။ နောက်တစ်ခါများ မင်္ဂလာဆောင်မယ့်သူများရှိရင် ဖိတ်စာပို့လိုက်မယ်နော်..။ လာနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါနော်..။ မလာနိုင်ဘူးဆိုလည်း ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး..။ လာနိုင်အောင်တော့ လာစေချင်တယ်လို့ပြောရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ အကြံပေးလိုက်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား..။
အန်တီအေး (facebook မှာ အန်တီ လို့ နံမည်ခံထားလို့ ပါ) တယောက် စိတ်ကူးထဲမှာ ဘယ်သူနဲ့ မင်္ဂလာအခါခါဆောင်ခဲ့ တာလည်း။ :)
အနောက်နိုင်ငံများမှာတော့RSVP (répondez s'il vous plaît) , please respond ဆိုတဲ့etiquette ရှိတယ်။ ပွဲလမ်းအတွက် ဖိတ်စာပို့ တယ်။ ဖိတ်စာမှာ RSVP by May 19, 2012 စသဖြင့် သတ်မှတ်ရက်တခုပေးထားတယ်။ အပျိုကြီးတွေကို ဖိတ်ရင် တယောက်ထဲလား plus one လားမေးတယ်။ လာမယ်ဆို အကြောင်းပြန်လိုက်ယုံဘဲပေါ့ ။ ဒါကဘာပွဲလမ်းမဆိုအတွက်ပါ။ မင်္ဂလာဆောင်ဖူးမှသိတာမဟုတ်ပါ။ ကျနော်မင်္ဂလာဆောင်တွေခဏခဏ ရောက်ပေ မဲ့ မင်္ဂလာမဆောင်ဘူးပါ၊ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို ဖိတ် ရမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။
တက်ရောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အတည်ပြုချက်ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိအောင်ကူညီနိုင်တာကို သဘောပေါက်နားလည်ပေးနိုင်ကြပါတယ် ဦးဦးရယ်။
အခုအေ၇ာတို့ ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကို နည်းနည်းထပ်ရှင်းကြည့်ခြင်ပါတယ်။
အချိန်တန်အရွယ်ရောက်ကြပြီး ရည်မှန်းချက်အတော်အသင့်လည်းပြည့်စုံကြလို့ အိုးအိမ်ထူထောင် မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီဆိုတော့ နည်းလမ်းတွေဘယ်လိုကွဲကွဲ အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုခုရဲ့ အသိအမှတ်ခံယူဖို့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုခုကို လိုက်နာပြီး ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောအခြေခံခြင်း တူညီမယ်ထင်ပါတယ်။
ရွေးချယ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ဖိတ်စာတစ်စောင်ရဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်ဟာ လူအချို့အတွက် သုံးလိုက်မလား၊ မသုံးပဲထားရမလား အလေးထားသုံးသပ်ရမည့် စားရိတ်ဖြစ်လို့နေတတ်ပါတယ်။
ဗျိုးဟစ်ကာဖိတ်ကြားတဲ့ဓလေ့နှင့်ကြီးပြင်းလာရတဲ့ အေ၇ာတို့အဖို့ နှုတ်နဲ့ဖိတ်လည်း လုံလောက်ပါတယ်။
ဖိတ်ကြားမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်အတန်းနှင့် အရေးပါမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဖိတ်ကြားရခြင်းစတဲ့ ကွာခြားချက်များ ရှိတတ်တာလည်း သဘောပေါက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ငွေကြေးတန်ဖိုးမြင့်လို့ အကန့်အသတ်နှင့်မှာယူထားရတဲ့ဖိတ်စာကို စိစစ်သုံးတဲ့အနေနဲ့ ဒီလူဒီလူတွေကတော့ သီးခြားဖိတ်ကြားစာ ပို့သင့်တယ်၊ ဒီလူနဲ့ဒီလူကို ပူးပေါင်းအမည်တပ်ကာ ဖိတ်စာတစ်စောင်ပဲသုံးတော့မယ်၊ ဒီလူတွေကတော့ ရင်းနှီးမှုအတိုင်းအတာအရ ပကာသနတွေလည်းသိပ်မလိုအပ်တာကြောင့် ဖိတ်စာသုံးမနေတော့ဘူးလို့ ခွဲခြားတာမျိုးကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။
တွေးစရာဖြစ်လာတာက အစထည်းက တန်ဖို့သင့်တင့်တဲ့ ဖိတ်စာကိုမသုံးချင်လောက်အောင် ဒီမင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲက အရမ်းကြီး ခမ်းနားထည်ဝါဖို့ရည်မှန်းလေသလားပေါ့။
ဒီလိုဖိတ်စာမျိုး သုံးကိုသုံးသင့်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားသူတွေနှင့် မူရင်းဖိတ်ကြားစာအား စိစိစစ်စစ်သုံးစွဲဖိတ်ကြားခံရတဲ့သူတွေက တချိန်တည်းတပြိုင်တည်း ဧည့်ခံပွဲတက်ရောက်ဖို့ တန်းတူညီမျှ အဆင့်အတန်းတူတယ်လို့ရော ယုံကြည်သင့်ရဲ့လား စသည်ဖြင့်ပေါ့ဦးဦးရယ်။
သူများတွေ မင်္ဂလာကိစ္စမှာ လာကတ်သပ်နေတယ်၊ မင်္ဂလာမရှိဘူးလို့လဲ အပြစ်မမြင်ကြစေလိုပါဘူးနော်၊ ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးမှ စာနာနားလည်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဖိတ်စာက လူတိုင်းစေ့ဝေဖို့မလောက်တာကြောင့် နင်တို့ကိုဖိတ်စာမပေးတော့ဘူး နားလည်ပေးပါဆိုလာလျှင် သူတို့နားလည်ပေးစေချင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးထက်ကျော်ပြီး နားလည်နေမိတာကိုက အပျိုကြီးဖြစ်စပြုနေပြီပြောလဲ ခံရမှာပါပဲ။
အခုမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်တဲ့သူက မင်္ဂလာမဆောင်ဘူးလို့ ဘယ်လိုဖိတ်ရမှန်းမသိလို့လည်း နေပါလိမ့်မယ်။
နွေဦးကတော့ ကြိုကြားကြိုကြား မင်္ဂလာမဆောင်ဘူးပေမယ့် မင်္ဂလာပွဲတွေကို ကတီးကတီးသွားရလေ့ရှိပါတယ် ။ ဒီတော့ မင်္ဂလာပွဲဖိတ်ကြားခံရခြင်း အတွေ့ အကြုံ အတော်လေးရင့်ကျက်နေပါပြီ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဖိတ်စာတစောင်ပို့ လိုက်ရင် လုံးဝမလာပဲလဲ နေလို့ရသလို တအိမ်လုံး မီးခိုးတိတ် ကြွရောက်ချီးမြှင့်လို လဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ သာရေးနာရေးကို ဦးစားပေး တက်ရောက်လေ့ရှိတာကိုး ၊ ဒီတော့ ဖိတ်လိုက်ရင် ဖိတ်စာအရေအတွက်ရဲ့ ၉၀% လောက်က လာလေ့ရှိပါတယ်၊ ဒီတော့ အစားအသောက် အလေအလွင့် ဖြစ်မှုတအားကို နည်းပါတယ် ၊ ပိုဦးတော့လျှံဦးတော့ လိုအပ်နေရာတွေများလွန်းလို့ နေ့ တွင်းချင်း ကြိုက်တဲ့နေရာကို သွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်ပါသေးတယ်၊
အဲ့ … စလုံးမှာကျ ဖိတ်ပုံဖိတ်နည်းက တမျိုးဗျ …ဒီမှာကတော့ သာရေးနာရေးပွဲတွေကို တော်ရုံရင်းနှီးမှုလောက်နဲ့ မသွားဖြစ်ကြဘူး၊ ပိတ်ရက်လေးတရက်မှာ နားနားနေနေ နေချင်တာလဲ ပါသလို ဒီပိတ်ရက်တရက်လေးမှာပဲ ပွဲတွေက တိုက်နေကြလို့ လဲဖြစ်နိုင်သေးပါတယ်၊ ဒါကြောင့် မင်္ဂလာပွဲရက် မင်္ဂလာ အချိန် သေချာသွားရင် လာဖြစ်လား, လာမှာသေချာလားလို့ မေးလေ့ရှိပါတယ်၊ တခါတုန်းကဆိုရင် ၉နာရီကနေ ၁၀နာရီအတွင်းမှာ လာဖြစ်အောင်လာပါတဲ့ ..ဧည့်ခံရ အဆင်ပြေအောင် သတိုသမီးဘက်က သူငယ်ချင်းတွေကို အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲ စီစဉ်ထားလို့ ပါတဲ့ .. အဲ့လိုမျိုး အချိန် အကန့် အသတ်နဲ့ တောင် ဖိတ်တာကြုံဖူးသေးသကိုး .. ဒီတော့ အဲ့လိုမေးတာဟာ အလေးမထားလို့ မဟုတ် ( အလေးမထားရင် မေးတောင် ဘယ်မေးမလဲနော့) .. အလေးထားလို့သူ့ မှာများ တခြားအရေးကြီးကိစ္စတွေ များ ရှိနေမလားလို့ တီးခေါက်တဲ့သဘောလို့ ပဲ မှတ်ယူထားလိုက်ပါတယ်၊
နောက်တခုက အစားအသောက် အစီအစဉ်အတွက်ဖြစ်ပါမယ်.. လူ၃၀၀ ဖိတ်လို့ လူ ၃၀၀ စာ အစားအသောက် စီစဉ်ထားတယ် ဆိုပါစို့ .. ပွဲ ၂၀၀ လောက်ပဲကုန်ရင် ကျန်တာတွေက နြှျေမာစရာလေ .. အဲဒီကျတော့မှ ပွဲပိုတွေကို သွားလှူဖို့ ကျတော့လဲ ဒိမှာက သိပ်တော့ အဆင်မပြေလှဘူး .. ဒီတိုင်းဝဲပလိုက်ရမယ့်အစား အစထဲက လာမယ့်လူ အရေအတွက် သေချာလေး မေးပြီး အစားအသောက် စီစဉ်ထားတော့ အလေအလွင့် သိပ်မရှိတော့ဘူးပေ့ါ .. လူ၃၀၀ လောက်ဖိတ်လိုက်တာတာ ၂၀၀ပဲလာမယ်ဆိုလို့ ကျန်တဲ့လူ၁၀၀ စာကို ဘုန်းကြီးကျောင်းအလှူငွေထဲ ငွေသားပြောင်းလဲလှူဒါန်းနိုင်ဦးတော့ ၂ဦး၂ဖက် အကျိုးရှိတယ်ပေ့ါ ..
ပြီးတော့မှ သေချာပါပြီဆိုတဲ့သူတွေကိုပဲ ဖိတ်စာကို အီးမေးလ်မှ တဆင့် ပို့ လိုက်တယ်လေ …တကယ့် ဖိတ်စာကျ သွားရလာရ ကရိကထ များတာမို့ရုံးတခုထဲကလူတွေဆောင်တဲ့ပွဲလောက်ပဲ ဖိတ်စာရဘူးပါတယ်.. ကျန်တာကတော့ ဖုန်းနဲ့ဒါမှမဟုတ် မေလ်းနဲ့ဒီနေ့ဒီရက် ဒီနေရာ ဒီအချိန်ဆို လိမ့်ရတာပါပဲ ..(အဲ့ .. သူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ စာတိုက်ကနေ လှမ်းပို့ ဖူးပါတယ်) .... … ခုသူက ဖိတ်စာပို့ လိုက်မယ်ဆိုတာလဲ hardcopy မဖြစ်နိုင်ပါဘူး .. သူ့ မှာ အမအီးမေးလ်မရှိလို့အမကို မေးလ်ပို့ ခိုင်းတာဖြစ်ပါမယ် .. ပြီးတော့ သူဆောင်မှာက စနေနေ့ ကြီးလေ .. ဒီမှာ များသောအားဖြင့် စနေကို အလုပ်လုပ်ရလေ့ ရှိတာကြောင့် လာနိုင်ရဲ့ လားလို့ မေးတာ ဖြစ်ပါမယ် … သူ့ မင်္ဂလာဆောင် ချိန် က မိုက်တယ် အကြာကြီးပဲ ၅နာရီတောင် .. စနေအလုပ်လုပ်သူတွေအတွက် ထည့်တွက်ပေးပြီ ခုလို flexible time ကို စီစဉ်လိုက်တယ်လို့ ထင်တာပါပဲ .. စဉ်းစားနေတာ မနက်စာတပွဲ ညစာတပွဲ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့သွားစားရမလားလို့… :cools:
အမကိုတော့ မသိဘူ .. သူက နွေဦးကို တရားပွဲ ဖိတ်သလိုဖိတ်တာ ..facebook မှာ wedding event Join မှာလားလို့ လာ invite တာ .. ဘာရမလဲ .. စိတ်ဆိုးလွန်းလို သူဖိတ်ဖိတ်ချင်းပဲ Join ကို စကန့် မဆိုင်း နှိပ်ပလိုက်တယ် .. ဒါတောင် မယုံချင်သေးဘူး .. facebook chat box ကနေ ချက်ချင်းလာမေးတယ် … “အဟုတ်လား ~~အဟုတ်လား ~~အဟုတ်လား” တဲ့ … .နွေဦးလဲ ခုထိ ဖိတ်စာတော့မရသေးဘူး … ဒါပေမယ့် လူကတော့ အဲ့ဒီနေ့ ဘာအရောင် ၀တ်ရမလဲတောင် စိတ်ကူးပြီးနေပြီ … :P…
ဟီး.. ပြောတာတွေက တောင်ရောက် မြောက်ရောက်နဲ့ .. ဆိုလိုချင်တာက “အမအေးရယ် .. စိတ်လျော့ပါကွယ်“ .. အဲ့သီချင်းလေး ဆိုပြချင်ပါတယ် … သူက အမကို သတိတရနဲ့မှတ်မှတ်ရရ ဖိတ်တာလေ .... မဟုတ်ရင် အမသိတောင် သိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး .. ဒီတော့ ကာ ကိစ္စအထွေအထူးမရှိရင် စိတ်ကောက်ပြေပြီး လာခဲ့ပါလို့ နော် …နွေဦးတို့ တွေ မတွေ့ တာ ကြာလှပြီလေ …ဦးရီးတို့ ကိုပစ်တို့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ လဲ လာမယ်ပြောတယ် … အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကျမှ စားရင်းသောက်ရင်း ရန်ကုန်မန်ဘာတွေရဲ့အတင်းလေးဘာလေး ပြောကြရအောင် :D ..
လာဖြစ်ရင်ဖုန်းခေါ်လိုက်နော် .. အတူတူချိန်းသွားရအောင် …:plane:
အေးတော့..။ ဘုကျကျနဲ့ အကောကောင်းလိုက်တာ နာ ခရမ်းရောင်လေးဖြစ်သွားပါလား..။ ဟိ ဟိ..။ နာ ခရမ်းရောင်ဖြစ်ဖို့ တစ်ပို့စ်ပဲလိုတုံး မင်ဂါကိစ္စ၀င်ကောလိုက်တာ ၀မ်းသာဖို့တောင်ကောင်းသေး..။ အဲလိုမှန်းသိ စောစောကတည်းက ပို့စ်တင်ပါတယ်..။
ဒီက မောင်မောင်ပစ် လူပျိုကြီးလဲ မာကလာပင်မတက်ဖူးပေမယ့် ....
လူ ၂၅၀ လောက်ဖိတ်တာ လူသုံးဆယ်လောက်မလာတော့
မှာထားတာ တစ်ဝိုင်း ၃၀၀ ကျော်နဲ့ တစ်ထောင်ကျော်အလကား ဖြစ်ကုန်ပါရောလား ...
ဒီလို ၁၀၀၀ ကျော်ကျော်ကို ညားခါစ ဇနီးမောင်နှံ ဘာလီကျွန်းကိုသွား
အခန်းတံခါးပိတ်လို့ စန္ဒရားနှိပ် နိုင်သေးတယ်လေ ..... :D:D:D
လာလိုက်ပါအမအေးရေ ရောမရောက်ရင် ရောမအတိုင်းအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ရတာပဲမဟုတ်လားဗျာ .....
ဒီပွဲက ရွှေလိပ်ပြာကျော်မောက်လို့ တော်ကောက်တဲ့ပွဲတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်
ဟီးဟီး နောက်တာနော် :D :D :D
ငါ့အကိုတို့ လင်မယား အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းဖတ်နိုင်ပါစေ ....
မာလကာပင်မတက်ဖူးသူတွေ၊ ဇီးသီးမစားဖူးသူတွေတယ်များသလို၊ မာလကာပင်ကို တက်ကာကြည့်လျှင်...မန်ကျဉ်းပင်အလား အကိုင်းမာတာသိရပါသဗျ။ ဇီးသီးစားကြည့်တဲ့အခါ..ဖန်တွတွ၊ ချိုဆိမ့်ဆိမ့်နဲ့ အရသာမှာ ငြိသွားပါလိမ့်မယ်။ အခန်းတံခါးပိတ်ပေမယ့် စန္ဒရားမနှိပ်ပဲ၊ iPad နဲ့မှ ကြည်သာနေရင်လည်း၊ အဆင်ပြေသလိုသာ၊ ခွင့်လွှတ်ရပါသတဲ့။ ဆွေသဟာ၊ အဖော်တွေနဲ့ ညီညာစွာနဲ့ မဂ်လာပွဲကို၊ အသေအခြာဂုဏ်ပြုရအောင်လား 'မြန်အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်' ဝိုင်းတော်သားတို့ရေ....
ဒီလူနဲ့ ဒီလူကို ငါ့အကိုတဲ့... :( :( :(
အဲနေ့ ကျရင်တော့ ကြက်ရိုးပဲ ထည့်ပေးမယ်.... :D :D :D
မင်္ဂလာပွဲကို ဘယ်အချိန်လောက် အရောက်သွားကြမှာလဲဗျို့....
ကြည့်စမ်း.. ဘယ်ချိန်သွားမှာလဲမေးတာ မဖြေဘဲ ကျေးဇူးလေးတွေပဲ နှိပ်သွားတယ်။ တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေပဲ :p
အစ်မဖြေမယ်ညလေး။ ညလေးဘယ်ချိန်ရောက်မှာလဲပဲ ပြောလိုက် (အစ်မတို့ရှောင်ပြီးလာခဲ့မယ်)။ :D
အဟီး။ အတည်ပြောတော့မယ်နော်။ တရားနာဖို့ ၁၂ နာရီ အရောက်လာခဲ့ပါမယ်လို့ :)
စင်္ကာပူမှာ စိတ်အညစ်ရဆုံးက မ၈င်္လာဆောင် ဖိတ်ရတဲ့ အလုပ်ပါ။ ရန်ကုန်နဲ့လည်း တော်တောာ်ကွာတော့ တစ်ခြားလူမပြောနဲ့ မိဘကတောင် ဆူပါတယ်။ ဖိတ်တဲ့လူတွေကို လာ မလာ သေချာအောင် မေးနေလို့တဲ့။ မမေးလို့လည်း မရတဲ့ အခြေအနေမို့ပါ။ ရန်ကုန်မှာဆို ဖိတ်စာပို့လိုက်ရင် ဘယ်နှစ်ယောက်လာလာ သိပ်စိတ်ပူစ၇ာမလိုဘူးလေ မေးလေ့မေးထမှ မရှိတာ။ နောက် ဒီရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကလည်း တစ်ယောက်ဆို ဆိုသလောက် တော်တော် သိသာပါတယ်။ ဒါဆို မ၈င်္လာမဆောင်နဲ့ပေါ့လို့ ပြောရမလိုပါပဲ။ ဆောင်ကလည်း ဆောင်ချင်တာပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝအလှည့်မပြောင်း အချိုးအကွေ့တစ်ခုခုကို သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တူတူ ပျော်ပျော်ပါးပါး တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ ဖြတ်သန်းချင်တာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ ဆနဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ကေပီဇက်တုန်းကဆို သေသေချာချာ မေးထားပါရက်နဲ့ အယောက် ၂ဝလောက်မလာပါဘူး။ တစ်ယောက်ကို စလုံး ၆ဝ နှူန်းနဲ့သာ တွက်ကြည့်ပေတော့။ မဖိတ်ရင်လည်း ဒီလောက်ခင်နေတာတောင် မဖိတ်ဘူးဆိုပီး စိတ်ဆိုးပါဦးမယ်။ လာမှာလား မေးတော့လည်း လာမယ်ပြောပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ မလာဘူး ကြိုပြောရင် မှာစရာမလိုတော့ဘူးလေ။ ကုန်ကျမယ့် ပိုက်ဆံကိုလည်း တစ်ခြားနေရာမှာ သုံးလို့ရတာပေါ့။ တစ်ကယ်ကို နှမြောစ၇ာကောင်းတာပါ။ အဲတော့ လာမှာလား သေချာ လား မေးလို့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ မအေးရေ။ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့်ပါ။ ကိုချင်းတွင်းသားရေ အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေနော်။
ဒီစာသားကို နားမလည်ဘူးဆိုလို့ မ KPZ ကို G talk မှာရှင်းပြလိုက်ရသေးတယ် ....
ကိုချင်းတွင်းသားရေ ခင်ဗျားကော သံစဉ်တွေတော်တော်ရပြီလား ဟဟ
"""အခန်းတံခါးပိတ်လို့ စန္ဒရားနှိပ်တယ်ဆိုတာ အခန်းတံခါးပိတ်ပြီး သံစဉ်နုနုရွရွလေးတွေ အတူတူရှာကြတာ ပြောတာလေ ဟဟ """
ကျနော်လည်း အဲသည် စာကြောင်းကို ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေတာ။ စန္ဒရားဆိုတာ အသံတိုးတိုး (pianissimo)တဖုံ ကျယ်ကျယ်(forte)တမျိုးတီးနိုင်လို့piano-forte (အတိုကောက် piano) ကို ပြောတာလား ၊စမ်းရင်း စမ်းရင်း ရ သွားတဲ့တရားကို ဆိုလိုတာလား စဉ်းစားမိနေတာ။ အခုမှသေချာသွားတယ်။ :)
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မှ 'ကိုချင်းတွင်းသား' တို့ရဲ့ မဂ်လာဦးဆွမ်းကျွေးအလှူကို၊ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မိသားစုဝင်တွေ ကိုယ်စား၊ ညီမ မ KPZ, တူမတော် မနွေဦးနဲ့ မနွေဦးရဲ့ မွေးစားကလေး "စု"၊ ကိုတာရာပွလေးနဲ့ တူမတော် ဗရော်နီကာ၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုဖြိုး၊ ကိုလိပ်ကြီး၊ ကိုပစ်ကလေးနဲ့ ကျွန်တော် ကိုထွန်းတို့၊ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဝေးရောက်နေတဲ့ အကိုတော် 'ဦးရီးနက်ပြာ' ကတော့၊ မဂ်လာလက်ဖွဲ့လှမ်းပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒန်ပေါက် ကလည်း စားကောင်းသမို့၊ အားရပါးရ (၂) ပွဲတိတိ၊ အားပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီပုံလေးက၊ တူမတော်ဗရော်နီကာရိုက်ပေးတဲ့ ကိုထွန်း၊ ကိုတာရာနဲ့ ကိုဖြိုးတို့ရဲ့ အမှတ်တရပုံပါ။
ညနေမှာတော့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်က၊ ပင်နယ်ဆူလာပလာဇာမှာ၊ ပြုစုပါတယ်။ 'ကိုချင်းတွင်းသား' ရဲ့ မဂ်လာဦးဆွမ်းကျွေးအလှူဟာ၊ မတွေ့တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ စက်ာပူရောက် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မိသားစုဝင်တွေအတွက်၊ တွေ့ဆုံပွဲပမာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ 'ကိုချင်းတွင်းသား' တို့ရဲ့ မဂ်လာဦးမှသည်၊ ဘဝတလျှေက်လုံး မဂ်လာနေ့ရက်များကို၊ ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့၊ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မိသားစုဝင်တွေကိုယ်စား ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အခန်းတံခါးပိတ်ပြီး စန္ဒယားနှိပ်တယ်ဆိုတာ မကြာမကြာ ကြားဖူးပါရဲ့၊
အဆန်းအပြားစိတ်မရှိတော့ တခမ်းတနားသိပ်မတွေးမိလို့များလား မဆိုနိုင်ပါတယ်.....
"အော် .... အသံကျယ်ကျယ်...တီးကာ နှိပ်ကြမှာမို့၊ မီးပါပိတ်ပြီး... (အဲ ဆောတီး... ကာရန်ယူတာအကျင့်ပါနေလို့စကားလွဲသွားတယ်) တံခါးပိတ်ပြီး တီးတာနေမှာ" ဒီလိုသာတွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုလိုတတ်သိနားလည်သူတွေရှင်းကာပြမှ အနုအရွ သံစဉ်ရှာကြကြောင်း ကောင်းစွာနားလည် သဘောပေါက်ရပါတော့တယ်။